ET-law: Seera Yakkaa Mootummaa,--Kitaaba Afuraffaa
Seera Yakkaa Mootummaa,--Kitaaba Afuraffaa
Yakkoota Faayidaalee UmmataFi Jireenya Hawaasummaa Irratti Raawwataman
Yakkota Amanannaa Ummataa Irratti Raawwataman
Sanadoota Sobaa Uumuu, Sanadoota sobaatti Jijjiiruufi Balleessuu
Keewwata 375. Soba Qabatamaan Raawwatamu
Namni kamiyyuu mirga yookiin faayidaa nama biroo miidhuuf, yookiin mirga yookiin faayidaa hin malle kamiyyuu ofiif argachuuf yookiin nama biroof argamsiisuuf yaaduun:
(a) falmiileen seeraa yommuu adeemsifaman ragummaan kan dhihaatan, ijoo dubbii tokko mirkaneessuu kan dandeessisan yookiin kan mirkaneessan fakkaatan kan akka barreeffamaa, sanadoota biroo yookiin wantoota qabatamoo fakkaatan kan uumee yoo ta’e;yookiin
(b) sanada sobaa qopheessuuf mallattoo qubaa nama birootiin, mallattoo qubeessaatiin, mallattoon yookiin chaappan kan fayyadame yoo ta’e;
(c) barreeffama dhugaa jijjiiruun yookiin laaquuun mallattoo sobaan, mallattoo harkaan taasifame yookiin mallattoo qubaan, chaappan, yookiin aangoo yookiin dandeettii hin qabne akka qabu fakkeessee mallatteessun sanada sobaa kan uume yoo ta’e; yookiin
(d) sanada tokko, keessumattu maqaa yookiin mallattoo nama mallatteessee yookiin qabiyee lakkoofsa, ijoo dubbii yookiin tarreeffama ibsaa sanadichaa guutummaan yookiin gartokkeen jijjiiruun, fooyyeessuun hir’isuun yookiin dabaluun yookiin balleessuun sobaatti kan jijjire yoo ta’e;
Hidhaa salphaa ji’a sadii hin caalleen, yookiin dubbichi baayyee ulfaataayommuu ta’etti hidhaa cimaa waggaa kudhan hin caalleen ni adabama.
Keewwata 376. Haala Dhokataa Ta’een Soba Raawwatamu
Namni Kamiyyuu yaada Yakkaa armaan olitti keewwata 375 jalatti ibsameen ka’uun sanadni tokko yommuu qophaa’utti, bu’aa seera qabeessa kan qabu yookiin qabaachuu danda’u ijoo dubbii sobaa kamiyyuu kan galche yookiin akka galu kan taasise yoo ta’e;
Bu’uura armaan olitti keewwata 375 jalatti tumameen ni adabama.
Keewwata 377. Haalawwan Addaa
Namni kamiyyuu yaada yakkaa armaan olitti keewwata 375 jalatti ibsameen ka’uun:
(a) qabiyyee sanada tokko ilaalchisee dogoggorsuun namni biroo sanada biroo yookiin sanada qabiyyeebiroo qabu irratti kan mallatteesse se’ee akka doggoggoru kan taasise yoo ta’e; yookiin
(b) maqaa nama hayyama isaa hin taaneen yookiin hin jirreen sanada kan kenne yoo ta’e; Adabbiin armaan olitti keewwata 375 jalatti tumameen ni adabama.
Keewwata 378. Sanada Sobaatiin Tajaajilamu
Namni kamiyyuu sanada sobaan qophaa’een yookiin gara sobaatti jijjiirameen osoo beekuu kan itti tajaajilame yoo ta’e; adabbii armaan olitti keewwata 375 jalatti tumameen ni adabama.
Keewwata 379. SanadootaMootummaa Yookiin Loltummaa Fakkeessanii Qopheessuu Yookiin
1. Boqonnaa kana keessatti armaan olitti yakkoota ibsaman keessaa tokko kan raawwatame:
(a) galmee mootummaa tokko, sanada beekamaa yookiin sanada faayidaa ummataa ilaallatu irratti yoo ta’e; yookiin
(b) sanada galmee mootummaa yookiin ummataatti galmaa’e yookiin dhaamoo namni du’e offisaa harka isaatiin barreesse irratti yoo ta’e; yookiin
(c) sanada ittisa biyyaa, yookiin caasaa,jaarmiyaa, raawwii hojii yookiin dhimmaaraayyaa ittisaailaallatu irratti yoo ta’e;
Adabbichi hidhaa cimaa waggaa kudha shan hin caallee ni ta’a.
2. Yakkichi kan raawwatame hojjetaa mootummaa galmeewwan, barreeffamoota, sanadoota beekamoo yookiin sanadoota biroo kana fakkaatan akka qopheessu, akka galmeessuu, akka eegu, yookiin isaan kana keessaa waraabbii akka kennu itti gaafatamummaan keennameefiin yoo ta’e; Adabbichi hidhaa cimaa waggaa shanii hanga waggaa digdamii shanii gahu ni ta’a.
Raawwiin yakkichaa baayyee ulfaataa yommuu ta’etti adabbichi hidhaa cimaa umurii guutuu ni ta’a.
Keewwata 380. Sanadoota Balleessuu
1. Namni kamiyyuu, yaada yakkaa keewwata 375 jalatti ibsameen ka’ee sanada nama biroo irratti ajajuu hin dandeenye irratti miidhaan akka qaqqabukan taasise, kan tarsaasekan balleesse faayidaa irraa akka hin oollee kan taasise, yookiin kan fudhate yoo ta’e;
Dubbichi salphaa yoo ta’e hidhaa salphaa waggaa lama hin caalleen, dubbichi ulfaataa yommuu ta’etti hidhaa cimaa waggaa shan hin caalleen ni adabama.
2. Balleessichi yakkicha kan raawwate miseensa maatii isaa, fira dhihoo isaa yookiin nama isaa waliin faayidaan yookiin jaalalaan walitti hidhame yookiin isa waliin jiraatu irratti yoo ta’e; adabamuu kan danda’u iyyannoon dhuunfaan yoo dhihaatedha.
Keewwta 381. SanadootaMootummaa Yookiin Loltummaa Balleessuu.
1. Yakki armaan olitti keewwata 380 jalatti ibsame kan raawwatame sanadoota mootummaa yookiinummataa yookiin loltummaa irraatti yoo ta’e adabbichi hidhaa cimaa waggaa kudhan hin caaleedha.
2. Yakkichi kan raawwatme hojjetaa mootummaa sanada akkannaa akka qopheessu, akka galmeessu, akka eegu yookiin akka kennu itti gaafatamummaan kennameefiin yoo ta’e; Adabbichi hidhaa cimaa waggaa digdamii shan hin caalleedha.
Haalli raawwii yakkichaa baayyee ulfaataa yeroo ta’etti adabbichi hidhaa cimaa umurii guutuu ni ta’a.
3. Yakkichi kan raawwatame dagannoon yoo ta’e adabbichi hidhaa salphaa yookiin adabbii maallaqaa ta’a.
Keewwata 382.SanadootaDaldalaa Yookiin Wabummaa Daddarboo Sobaatti Jijjiiruufi
1. Yakki sanada gara sobaatti jijjiiruuyookiin kanumaan tajaajilamuu yookiin namni biroo akka itti tajaajilanu taasisuu kan raawwatame waraqaa maallaqni ittiin ergamu (Hawaalaa), cheekiin, sanada waadaa, buukii (dabtara) baankiin yookiin sanada baankiif ittin dabarsan, kardii ittiin daldalamu yokiin sanada jaarmiyaa mallaqa kaa’u yookiin liqeessu keessatti argamu yookiin sanda aksiyoonaa irratti yoo tahe adabbichi hidhaa cimaa waggaa kudhan hin caalle ni ta’a.
2. Gochi keewwata 380 jalatti ibsame sanadoota yookiin ragoota kanneen irratti kan raawwatame yoo ta’e; adabbichi hidhaa cimaa waggaa kudhan hin caalee ni ta’a.
3. Gochi Keewwata 380 jalatti ibsame sanadoota yookiin ragoota kanneen irratti kan raawwatame dagannoon yoo ta’e; adabbichi hidhaa salphaa yookiin adabbii maallaqaan ta’a.
Keewwata 383. Barreeffama Akka Haadhootti (Dhugaatti) Lakkaa’amu yookiin Waraabbii Sirrii Gochi gara sobaatti jijjiiruu yookiin balleessuu waraabbii sirrii bakka sanadicha haadhoo ta’aniiyookiin warabbii sirii akka sanada haadhootti akka lakkaa’amu mirkanaa’e irratti kan raawwatamubu’uura seerichaatiintumaalee boqonnaa kanaa ragummaa qabaniin ni adabsiisa.
Keewwata 384. Waraaqaalee Tajaajila GeejjibaUmmataafi Waraqaalee Geejjibaa Sobaatti Jijjiiruufi Isanuma Kanatti Tajaajilamuu.
1. Namni kamiyyuu mirga yookiin faayidaa maallaqaa nama biroo irratti midhaa geesisuuf yookiin faayidaa hin malle argachuuf yookiin argachiisuuf yaaduun:
(a) lafarra, gaalaanarra, yookiin qilleensarra namootii, beenladooti yookiini mi’ooti yookiin shaqaxni kan ittiin deeddebi’an waraaqaaalee geejjibaa, tikeetota yookiin sanadoota geejjibaa aangoo seeraa osoo hin qabaatiin kan hojjete yookiin gara sobaatti kan jijjire yookiin fakkeessee kan hojjete yoo ta’e; yookiin
(b) dhugaa kan ta’an tikeetota, nagahewwan yookiin sanadoota gejjibaa, kanneenuma eerga tajaajilanii, haqamani yookiin uramanii booda irra deebiin itti fayyadamuf yookiin namni biroo akka itti tajaajilamu taasisuuf bifa tikeetii, nagahee yookiin sanada geejjibaa dhugaa kan kenneef yoo ta’e;
Hidhaa salphaafi adabbii maallaqaan ni adabama.
2. Namni kamiyyuu, osoo beekuu tikeetota, nagahewwan yookiin sanadoota geejjibaa gara sobaatti jijjiiraman yookiin taajaajila kennan kanneen akka dhugaa taasisee kan itti tajjajilame yoo ta’e; Adabbii maallaqaan, yookiin akka haala dubbichaatti hidhaa salphaa ji’a sadii hin caalleen ni adabama.
Waraqaalee Ragaaa Irratti Soba Raawwatamu
Keewwata 385. Waraqaalee Ragaaa Sobaa.
1. Namni Kamiyyuu faayidaa yookiin fooyya’insa argachuuf yookiin argachiisuuf yaaduun:
(a) barreeffamoota mirgaargamsiisuu dandaa’an, ragaaalee haala dhuunfaa ibsan yookiin waraaqaalee ragaa yookiin sanadoota mirkaneessaa ragaa dhimma akaakuu kamiiniyyuu illaallatan gara sobaatti jijjiire yookiin fakkeessee kan hojjete yookiin osoo beekuu sanada kana fakkaatanitti nama biroof akka itti tajaajilamuf kan kenne yoo ta’e; yookiin
(b) sanada gara sobaatti jijjiirame yookiin fakkeeffamee hojjetame yookiin sanada dhugaa tajaajila hin yaadamne yookiin isa kana hin ilaallanne osoo beekuu kan itti tajaajilame yoo ta’e;
Sanadni kun dhimma dhuunfaa kan qabate yoo ta’e; hidhaa salphaa waggaa tokko hin caalleen ni adabsisa; yookiin sanadichi amala uummatummaa kan qabu ta’ee akka waraqaa eenyummaa yookiin waraqaa ragaa dhaloota yookiinragaa mirkaneessa hiyyummaa, aamala gaarii, gahumsa yookiin gahumsa dhabuu yookiin waraabbii galmee ummataa yookiin to’annaa yoo ta’e; adabbichi hidhaa salphaa ji’a sadii gadi hin taane ni ta’a.
2. Yakkichi kan raawwatame hojjetaa mootummaa sanadoota kannen fakkaatan akka qopheessu, akka kaa’u, akka eegu yookiin akka kennu itti gaafatamummaan kennameefiin yoo ta’efi yakka kana kan raawwate mirga namabiroo irratti miidhaa geessisuuf osoo hin yaadin yoo ta’e/Keewwata 375/; adabbichi hidhaa salphaa ji’a jaha hanga waggaa shanii gahuun yookiin adabbii maallaqaa, yookiin lamaaninuu ta’a.
3. Yakkichi kan raawwatame dagannoon yoo ta’e adabbii maallaqaa qarshii kuma tokko hin caallee ni ta’a.
Keewwata 386.Ragaaa Ofiseelawaa Soba Ta’e Waliin Dha’uun Argachuu
Namni kamiyyuu fayidaa yookiin fooyaa’iinsa argachuuf yookiin argachiisuuf yaaduun:
(a) hojjetaa mootummaa yookiin nama ijoo dubii bu’aa seeraa qabu mirkaneessuuf yookiin hundeessuuf aangoon kennameef kamiyyuu gowwamsuun, sirruummaa guuyaafi baraa, raga, mallattoo yookiin warrabbii tokko yookiin ijoon dubbii kana fakkaatu kamiiniyyuu sobaan akka mirkaneessu kan sossobe yoo ta’e; Yookiin
(b) nama biroo dogongorsuuf sanada akkanan kan tajaajilame yoo ta’e; hidhaa salphaan yookiin adabbii maallaqaan ni adabama.
Keewwata 387. Waraqaa Ragaa Yaalaa Sobaa
1. Hakiimii,haakiimii ilkanii, caareessaa qorichaa (farmaasistii),hakiimii beelladaa, deesiftuu yookiin nama biroo ogummaa haakimuummaa isaatiin yaala ilaalchisee waraqaa ragaa kennuuf mirga kana qabu namni biroo kamiyyuu waraqaan ragaa hojiirra akka ooluu osoo beekuu, nama fudhatu saanaaf faayidaa hin malle argachiisuu kan danda’u yookiin fayidaa seera qabeessa namabiroo kan miidhu waraqaa ragaa yaalaa sobaa qopheessee barreessee kan kenne yoo ta’e;
hidhaa salphaan yookiin adabbii maallaqaan ni adabama. Yakkichi yeroo irra deddeebi’ametti hojii oguumaa isaa ilaalchise adabbiin dabalataa murtaa’u kan raggaa’ee ta’a/Keewwta 123 (c)/.
2. Waraqaaragaa yaalaa sobaa kennuun kan raawwatame kennaan waadaa kennaan yookiin fayidaa biroon yoo ta’e; adabbichi hidhaa cimaa waggaa kudhan hin caalleefi adabbii maallaqaa qarshii kuma shantama hin caalleen ta’a.
3. Waraqaa ragaa yaalaa soba sana kan qopheesse hojjetaa mootummaa ta’ee yakkicha kan raawwate aangoodhuma isaa ofiisalawaa kanaan yoo ta’e; adabbichi yakka keewwata xiqqaa (1) jalatti ibsameef hidhaa salphaa waggaa sadii gadi hin taane, yookiin dubbbichi ulfaataa yommuu ta’etti hidhaa cimaa waggaa kudhan hin caalee, yaaka keewwata xiqqaa (2) jalatti ibsameef hidhaa cimaa waggaa kudha shan hin caaleefi adabbii maallaqaa qarshii kuma dhibba tokko hin caallee ni ta’a.
4. Namni kamiyyuu waraqaa ragaa sobaan qoophaa’e ta’uu isaa osoo beekuu nama biroo gowwomsuuf kan itti tajaajilame yoo ta’e; adabbii keewwata kana keewwata xiqqaa (1) jalatti tumameen ni adabama.
Keewwata 388. Yakkoota Dachaa
Namnii kamiyyuu waraqaa ragaa sobaa, jecha ragummaa sobaa yookiin waraqaa ragaa sirrii isa hin ilaallanne yookiin akka inni itti tajaajilamu hin yaadamne argatee itti yaade kanumatti fayyadamuun yakka dabalataa raawwachuuf kan itti tajaajilame yoo ta’e; keessumattuu yakka amantaa hir’isuu yookiin gowwomsuu ta’ee, yakkichi yoo xiqqaate kan yaalame yoo ta’e;
Manni murtichaa tumaalee adabbiin yakkoota dacha ittiin cimuu/Keewwta 66/ hordofuun adabbicha ni murteessa.
Keewwata 389.Kenniinsaafi Galmeessa Jecha Soba
1. Hojjechiisaan, abbaan yookiin hoji gaggeessaan hoteelaa yookiin mana ciisichaa kamiiyyuu yookiin to’annaa abbaa aangoof akka ta’u tarreeffama namoota dhuunfaa yookiin gochoota akka galmeessu bu’uura seeraatiin dirqamni kan irra kaa’ame namni biroo kamiyyuu; itti yaadee:
(a) maqaa namaa, guyyaafi bara, yookiin ibsa namaa yookiin mi’aa dhugaa hin taane kan galmeesse, kan galmeessise, yookiin akka galmaa’u kan hayyame yoo ta’e; yookiin
(b) bu’uura haala dhugummaa isaatiin osoo hin galmeessin yookiin akka galmaa’u osoo hin taasisin kan hafe yoo ta’e;
2. Balleessichi Yakkicha kan raawwate fedhii faayidaan yoo ta’e; adabbichi hidhaa salphaa waggaa tokkoo gadi hin taaneefi adabbii maallaqaa ni ta’a.
Keewwata 390. Meeshaaleefi Mallawwan Hojii Sobaa Raawwachuuf Tajaajilan
1. Namni kamiyyuu karaa seeraan ala ta’een itti tajaajilamuufyaaduun barreeffamoota ofiiseelaawaa,waraqaalee ragaa, diippoloomota yookiin sanadoota, gara sobaatti jijjiiruuf yookiin sobaan uumuuf meeshaaleefi malawwan yookiin wantoota qabatamaa kan hojjete, harkatti kan galfate, kan qabate, kan kenne, yookiin gurgurtaaf yookiin kennaaf kan dhiheesse yoo ta’e; hidhaa cimaa waggaa shan hin caalleefi adabbii maallaqaan ni adabama.
2. Balleessichi meeshaalee, malawwan, yookiin wantoot qabatamaa, akaakuu akkanaa tajaajila akaakuu kamiifuu ooluu isaaniin dura fedhii bilisaa ofiisaatiin kan balleesseyoo ta’e adabbii kamiyyuurraa bilisa ni ta’a.
Mi’oota Sobatti jijjiiruu
Keewwata 391. Mi’oota Sobatti Jijjiiruufi Qulqullina Isaanii Gadi Buusuu
Namni kamiyyuu nama biroo gowwomsuuf yaaduun mi’oota daldalaa sobatti kan jijjire, fakkeessee kan hojjete yookiin qulqullina isaanii kan gadi buuse yookiin gara birootti kan jijiire yoo ta’e; Hidhaa cimaa waggaa torba hin caalleefi adabbii maallaqaan ni adabama.
Keewwata 392. Naannessuu
1. Namni kamiyyuu nama biroo gowwomsuuf yaadee mi’oota daldalaa sobatti jijjiraman, fakkeffamanii hojjetaman yookiin kan qulqullinni isaanii gadi bu’ee yookiin kanneen gara birootti jijjiraman akka dhugaatti, akka hin jijjiramnetti, yookiin hir’ina homaa kan hin qabne fakkeessuun gurgurtaaf kan dhiheesse, kan gurgure harka ummataatti akka naanna’u kan taasise yoo ta’e; Adabbii armaan olitti keewwata 391 jalatti tumameen ni adabama.
2. Yakkichi dagannoon yommuu raawwatamu adabbii maallaqaa qarshii kuma kudhan hin caalleen kan adabsiisu haalli isaa baayyee cimaa ta’ee raawwatichi eeggannoo adda taasisuuf ittigaafatamummaa kan qabu yoo ta’e, keessumattu sababa daldaaltummaa isaatiin eeggannoo akaakuu akkasii raawwachuun kan isarra eegamu ta’ee yoo argame dha.
Keewwata 393. Mi’oota Biyyaa keessaa Galchu, Biyyaa Alaatti Erguu, Harka Galfachuufi Kuusuu.
Namni kamiyyuu nama biroo gowwomsuuf yaaduun yookiin gowwomsaaf kan yaadame ta’uu isaa osoo beekuu mi’oota daldalaa sobatti jijjiraman yookiin soba kan ta’an yookiin kan manca’an yookiin qulqullinni isaanii kan gadi bu’e gara biyya keessatti kan galche, gara biyya alaa tti kan erge, harkatti kan galfate yookiin kan kuuse yoo ta’e;
Hidhaa cimaa waggaa torba hin caalleefi adabbii maallaqaan ni adabama.
Keewwata 394. Adabbii Cimsuufi Adabbiilee Dabalataa
1. Raawwatichi yakkoota armaan olitti ibsaman ogummaa isaa godhatee kan qabate yoo ta’e; hidhaa cimaa waggaa shanii hanga waggaa kudhanii gahuu danda’uufi akka ulfaatina dubbichaatti adabbii maallaqaa qarshii kuma shan gadi hin taaneen ni adabama.
2. Tummaaleen mi’oota dhaaluufi murtii ibsuu yeroo kamiyyuu akkuma eegamanittidha.
Keewwata 395. Haala Fayyaa Miidhuun Mi’a Daldalaa Sobatti Jijjiiruufi Qulqullina Isaa Gadi Buusuu.
Nyaatota, shaqaxootaafi mi’oota daldalaa fayyaaf balaa ta’an yookiin kan saman, fayyaa miidhuu danda’an , hojjechuu, quulqullina isaanii gad-buusuufi gurguruu tumaaleen ilaallatan ragummaa yeroo qabaatanitti raawwatamoo ta’uun isaanii akkuma eegamettidha/Keewwata 527/.
Iccitii Faayidaa Ummataa Ilaallatu Ibsuu
Keewwata 396. Iccitii Loltummaa Ibsuu
1. Loltun Yookiin namni tajaajila humna ittisaa keessatti argamu kamiyyuu, ganuufi basaasuu ilaalchisee haalawwan adabsiisan /Keewwata 248-252/ ala sababa hojii yookiin dirqama loltummaa isaatiin kan beeke ta’ee, amala isaatiin iccitii kan ta’e yookiin iccitii ta’ee akka eegamu kan ajajame yookiin ummataaf akka hin ibsamne kan dhorkame odeeffannoo, sanada yookiin ijoo dubbii kan ibse yookiin kan dabarse yoo ta’e,
Hojichi yookiin dirqamichi erga xumurameen booda yoo ta’ellee, hidhaa cimaa waggaa torba hin caalleen ni adabama.
2. Adabbichi hidhaa cimaa waggaa kudha shan hin caallee kan ta’u:
(a) yakkichi kan ilaallatu odeeffannoo yookiin Sanada Koodii iccitiin(lakkoofsaan) kan qabame yoo ta’e; yookiin raawwatichi icciticha akka eeguuf ifatti imaanaan kan itti kenname yookiin iccitichsa akka hin ibsineef kakuu waadaa kan kenne yoo ta’e; yookiin (b) yakkichi faayidaa adda ta’e irratti miidhaa kan geessise yoo ta’edha.
3. Yakkichi dagannoon kan raawwatame yoo ta’e, yakka salphaa armaan olitti keewwata xiqqaa (1) jalatti ibsameef adabbiin isaa hidhaa salphaa waggaa tokko hin caalle yookiin adabbii maallaqaa, yakka cimaa keewwata xiqqaa (2) jalatti ibsameef immoo hidhaa salphaa waggaa sadii hin caalleeni ta’a.
Keewwata 397. Iccitii Hojii Ibsuu
1. Hojjetaan mootummaa kamiyyuu /Keewwata 402/ bu’uura tummaa keewwata 396 jalatti ibsameen iccitii ta’ee eegamuu kan qabuufi sababa hojii isaatiin sanadoota, odeeffannoo yookiin ijoo dubbii beeke kamiyyuu, hojii yookiin muudama isaa erga gadilakkisee boodallee kan ibse yoo ta’e; Hidhaa salphaa yookiin adabbii maallaqaan ni adabama.
2. Balleessichi dirqama yookiin imaanan iccitii eeguu addaa kan itti kenname yookiin keessumattuu yakkichi miidhaa olaanaa kan qaqqabsiise yoo ta’e; adabbichi hidhaa cimaa waggaa kudhan hin caalle ni ta’a.
3. Yakkichi kan raawwatame dagannoon yoo ta’e, adabbichi yakka salphaa keewwata xiqqaa (1) jalatti ibsameef adabbii maallaqaa qarshii kuma tokko hin caalle yookiin hidhaa salphaa waggaa tokko hin caalle; yaaka keewwata xiqaa (2) jalatti ibsameef immoo hidhaa salphaa waggaa sadii hin caalle ni ta’a.
Keewwata 398. Iccitii Akka Ibsamu Hayyamame
Faayidaa Ummataaf jedhamee abbaa aangoo siviilii, bulchiinsaa yookiin loltummaa dhimmi ilaallatuun barreeffamaan hayyamni erga kennamee booda mana murtitti yookiin mana murtii qorannoo taasisuuf aangoo qabu kamiyyuu duratti iccitiin ibsame hin adaabsiisu.
Keewwata 399. Iccitii Sababa Ogummaan Yookiin Hojiin Beekame Ibsuu
1. Tajaajilaan amantaa, gorsaan seeraa, abukkaattoon, dubbi fixaan (attorney), jaarsolee murtii (arbtirators), jaarsolee araaraa, ogeessa addaa (expert), naqaashii (immaanyii), turjumaana, qaama waliigalteen biratti raawwatu (notaries), daarikteera jaarmiyaa dhuunfaa, gaggeessaa hojii, to’ataa, yookiin bu’uura tumaalee seera hariiroo hawaasaa yookiin daldaalaatiin hojjetaan iccitii akka eeguu dirqamni irraa jiru hakiima, hakiima ilkaanii, carreessaa qorichaa (pharmacist), deessistuu, narsii yookiin hojjetaa yaalaa gargaaraa biroo yookiin kan biroo kamiyyuu sababa ogummaa yookiin hojii isaatiin iccitii ibsameef hojii ogummaa isaa irraa yommuu jirus ta’e erga gadi-lakkisee booda kan ibse yoo ta’e; Iyyannoon dhuunfaa yommuu irratti dhihaatuu hidhaa salphaan yookiin adabbii maallaqaan ni adabama.
2. Barataan, hojjetaan yaaliirraa jiru yookiin hojjetaa shaakalaa sababa shakkala barumsaa hojii ogummaatiin iccitii beekuu danda’e kan ibse adabbii keewwata xiqqaa (1) jalatti ibsameen ni adabama.
3. Yakki iccitii ibsuu kan raawwatame daagannoon yoo ta’e; iyyannoon dhuunfaa yommuu dhihaatu adabbichi adabbii maallaqaa qarshii kuma tokko hin caallee yookiin hidhaa salphaa waggaa tokko hin caalee ni ta’a.
Keewwata 400. Iccitii Akka Ibsamu Hayyamame
1. Iccitii ibsuun kan hin adabsiisne:
(a) Namni iccitiin eegamuufii qabu ifatti hayyamaerga kennee booda yoo ta’e;
(b) Yaadachiisa yookiin gaaffii nama icciticha qabateen qaamni ogummaa yookiin to’annoo olaanaa dhimmichi ilaallatu hayyama barreeffamaa kan kenne yoo ta’e;
(c) Dhimma murtaa’e tokko irratti murtii mana murtii ifatti kenname bu’uura godhachuun kan ibsame yoo ta’e; yookiin
(d)Hojii ummataatiif jecha dhaddacha murtiitti akka ragaa bahu yookiin abbaa aangoo tokkoof ibsa akka kennu tumaan addaa seerichaa kan hayyamu yookiin kan ajaju yoo ta’edha.
2. Namni seeraan, mana murtiin yookiin abbaa aangoo dhimmichi ilaallatuun iccitii akka ibsu ajajame dirqama iccitii eeguu isaa sababa gochuun icciticha ibsuuf diduu hin danda’u.
Sababa kammiiniyyuu jechi qalbii jijjirraannaa abbootii amantaa biratti kenname akka ibsamu dirqisiisun hin danda’amu.
Keewwata 401. Iccitii Saayinsii, Industirii Yookiin Daldalaa Ibsuu
1. Namni kamiyyuu abbaa mirgaa yookiin abbaa qabiyyichaa miidhuuf yookiin faayidaa argachuufis ta’e argamsiisuuf yaadee seeraan yookiin waliigalteedhaan yookiin sababa itti gaafatamummaa hojii isaan dirqama qabu darbuuun odeeffannoo iccitiidhaan qabuun isarraa eegamu kan dinagdee, saayinsii yookiin mala ijaarsa teeknooloojii yookiin odeeffannoo, industirii yookiin daldalaa, saayinsii /aartii/ yookiin mala haala hojiirra oolmaa isaa nama itti ibsamuu hinqabneef kan ibse yoo ta’e;
Hidhaa salphaa waggaa tokko hincaalleefi adabbii maallaqaa qarshii kuma kudhan hincaalleen ni adabama.
2. ittisa biyyaatiif faayidaa kan qabu iccitiin saayinsii yookiin aartii kan ibsame yoo ta’e, tumaan addaa keewwata 396 jalatti ibsame raawwatiinsa ni qabaata.
Yakkoota Hojii Mootummaa Irratti Raawwataman
Keewwata 402. Hiika
1. “Hojjataa Mootummaa” jechuun mana hojii mootummaatti yookiin dhaabbata misoomaa mootummaa keessatti miindeffamee, muudamee, ramadamee yookiin ummataan filatamee dhaabbataan yookiin yeroodhaaf nama hojjatu kamiyyuu jechuu dha.
2. “ Mana Hojii Mootummaa” jechuun guutummaa guutuutti yookiin gartokkeen baajata mootummaatiin kan buluu fi mana hojii hojiiwwan mootummaa federaalaa yookiin naannoo keessatti hojjatamanu kamiyyuu jechuudha.
3. “Dhaabbata Misoomaa Mootummaa” jechuun gaheen abbummaa mootummaa guutummaa guutuutti yookiin gartokkeen kan keessatti argamu dhaabbata misoomaa yookiin waldaa aksiyoonaa mootummaa federaalaa yookiin naannoo jechuudha.
4. Mataduree kana jalatti akkaataan jechichaa hiika biroo kan kennisiisuuf yoo ta’e malee: “faayidaa” jechuun:
a. Kennaa, liqii, badhaasa yookiin koomishinii maallaqaan yookiin qabsiisa gatii qabu kamiiniyyuu yookiin qabeenya biraa yookiin faayidaa (mirga) qabeenya irra jiruuun kan tilmaamu;
b. Muudama, miindeffama yookiin waligaltee kamiiniyyuu;
c. Liqii, dirqama yookiin idaakamiiniyyuu guutummaa guutuuttis ta’e gartokkeen kaffaluu, hambisuu, waldandeessisuu yookiin wantoota kana irraa bilisa taasisuu;
d. Himata bulchiinsaa, yookiin hariiroo hawaasaa yookiin yakkaa hundeeffame yookiin hinhundeeffamne, yookiin adabbii himanni kun qaqqabsiisu yookiin qaqqabsiisuu danada’u kamiyyuu irraa yookiin dandeettii dhabuu irraa hambisuun yookiin mala kana fakkaatuun tajaajila yookiin tola taasifamu;
e. Mirga, gocha yookiin dirqama kamiiniyyuu raawwachuu yookiin raawwachuu irraa of qusachuu;
f. Haalawwan armaan olitti ibsamaniin alatti faayidaa yookiin tajaajila maallaqaan hin tilmaamamneefi;
g. Armaan olitti qubee “a-f” jalatti faayidaalee tarreeffaman keessaa tokko dhiyeessuu, haala faayidichi itti argamuu danda’u mijeessuu yookiin kanuma ilaalchisee waadaa seenuu yookiin fudhachuudha.
5. “Faayidaa hinmalle” jechuun badhaadhina hinmallee yookiin karaa hin malleen faayidaa argame jechuudha.
Keewwata 403. Tilmaama YaadaFaayidaa Argachuu Yookiin Miidhuu
Ragaaan faallaa ta’e yoo dhihaate malee, yakkoonni malaanmaltummaa kun kan raawwataman faayidaa hinmalle argachuuf yookiin argamsiisuuf yookiin miidhuuf ta’uun isaa yommuu tumametti, keewwaticha keessatti ijoon dubbii qabatamaa (gochi) ibsame raawwatamuun isaa yoo mirkanaa’e, gochichi kan raawwatame faayidaa hinmalle ofii argachuuf yookiin nama birooargachiisuuf yookiin mirga yookiin faayidaa garee sadafffaa miidhuuf akka ta’eetti ni tilmaamama.
Keewwata 404. Qajeeltoo
1. Hojjetaan mootummaa kamiyyuu yakkoota mata duree kana keessatti ibsaman keessaa tokkoon yommuu taawwatetti, tumaaleen adabbii armaan gaditti tumaman isa irratti ni raawwatamu.
2. Hojjataan mootummaa kamiyyuu itti himatame, gochi yakkamtumaan raawwate yookiin osoo hinraawwatin dhiisee hojii isaaf kenname osoo hojjatuu kan raawwatame yoo ta’eefi gochichis seerri idilee kan irratti raawwatamu ta’ee, haata’u malee, hojii mootummaa irratti ta’uu isaafi amantaa isa irratti gatame irraa kan ka’een dirqama irra jiru cabsuu isaatiin adabbichi kan cimu yoo ta’u, seera yakkaa kanaan tumaaleen mata dureewwan biroo jalatti tumaman raawwatamoo ni ta’u.
3. Hojjataan mootummaa kamiyyuu kallattiinis ta’eealkallattiin faayidaa hinmalle ofii argachuuf yookiin nama biroof argamsiisuuf yookiin mirga nama biroo irratti miidhaa geessisuuf yaaduun itti gaafatamummaa yookiin gahee itti kennameen wanta raawwachuu qabu akka hinraawwanne yookiin wanta raawwachuu hinqabne akka raawwatu, nama biroo irraa faayidaa kan fudhate yookiin kan gaafate, yookiin karaa biroo kamiiniyyuu ofii isaaf yookiin nama birootiif faayidaa argamsiisuuf aangoo isatti kenname yookiin imaanaa ummataa haala hinmalleen kan itti tajaajilame yoo ta’e; yookiin
Namni kamiyyuu faayidaa ofii agachuuf yookiin nama birootiif argamsiisuuf yookiin mirga nama biroo irra miidhaan akka qaqqabu taasisuuf yaaduun, hojjataa mootummaatiif faayidaa hinmalle kennuuf waadaa kan seene, dhiyeesse, kan kenne yookiin dhiyeessuuf kan waliigale yoo ta’e; yookiin
Hojii mootummaa sirnaan raawwatameef yookiin gara fuula duraatti raawwatamuuf faayidaa hin malle nama kamiifiyyuu kan kenne yookiin hojjataan mootummaa kamiyyuu kan fudhate yoo ta’e;
Yakkoota malaanmaltummaa mata duree kana jalatti ibsame raawwateera jedhamee adabbiin tumaalee armaan gadii jalatti ibsaman isa irratti ni raawwatamu.
4. Yakkoonni malaanmaltummaa yakkoota mata duree kana, boqonnaa lama, kutaa tokkoofi boqonnaa sadii, kutaa tokko jalatti ibsaman kan dabalatuufi sossobbii filannoo irratti kennamu /Keewwata 468/, sanadoota mootummaa yookiin loltummaa fakkeessuun qopheessuu yookiin sobatti jijjiiruu /keewwata 379/, amantaa hir’isuu cimaa /Keewwata 676 (1)/, maallaqa yookiin qabeenya malaammaltumman argame seera qabeessa fakkeessuun dhiyeessuufi yakkichaan deeggaruu /Keewwata 684/, gowomsaa cimaa hojjataa mootummaan raawwatamu /Keewwata 696 (a)/ ni haammata.
5. Hojjataan mootummaa kamiyyuu adabbii tumaa seeraa darbeen itti murtaa’u irraatti dabalataan faayidaan, maallaqni yookiin qabeenyi karaa seeraan alaan argate akka dhaalamu yookiin faayidichis ta’ee qabeenyichi kan hin argamne yoo ta’e gatii walgitu akka kaffalu ni taasifama.
Keewwata 405. Adabbiin Bulchiinsaafi Itti gaafatamummaan Hariiroo Hawaasaa Dabalataan Kan Raawwataman ta’uu Isaanii
Bu’uura tumaalee boqonnaa kana jalatti ibsamaniitiin yakkaan himatamaanii adabamuun yookiin bilisaan gadi lakkifamuun bulchiinsaan yookiin hariiroo hawasaatiin itti gaafatamumma jiru hinhambisu.
Keewwata 406. Himannaa Irraa Bilisa Taasisuu
1. Namni kamiyyuu yakkoota malaanmaltummaa keessaa tokkotti hirmaataa erga ta’e booda dhimmichi mana murtiitti dhiyaachuu isaatiin dura,waa’ee gocha raawwatameefi waa’ee gahee hirmaattotaa odeeffannoo faayidaa qabu yoo kenne qaama seeraan aangoon kennameefiin bu’uura seera yakkaa kanaatiin akka hinhimatamne taasifamuu ni danda’ama.
2. haallifaayidaa qabeessummaaragichaa murteessuufi namni gochicha raawwate akka hin himatamne itti taasifamu ilaalchisee tarreeffamni raawwii isaa sirina seera rogummaa qabuunni tumuma.
3. Haala seera qabeessa ta’eentajaajila argateef yookiin argachuu qabuuf faayidaa kamiiniyyuukan kenne, kennuu isaa nama saaxileef, matta’aa yookiin kennaa yookiin wanta gatii baasu kan kenne sababa yakkichaan qabeenya dhaalamu irraa ni deebi’aaf.
Yakkoota Hojjattoonni Mootummaa Hojii Mootummaa Irratti Raawwatan
Yakkoota Malaammaltummaa Qulqullummaafi Amanamummaa Hir’isuun Hojjettoonni
Keewwat 407. Seeraan Ala Aangootti Fayyadamuu
1. Hojjataan mootummaa kamiyyuu faayidaa hinmalle argachuuf yookiin argamsiisuuf yookiin mirga yookiin faayidaa nama biroo irratti miidhaa qaqqabsiisuuf yaaduun:
(a) muudama yookiin aangoo kennameef gocha ifa ta’een yookiin haala hanqina qabuun akkaataa hinmalleen kan itti tajaajilame yoo ta’e;
(b) aangoo ifatti kennameef irra darbuun kan hojjate yoo ta’e; yookiin
(c) dhimma aangoon isaa hin hayyamamneef, keessumattuu osoo aangoo hinqabaatiin yookiin erga hojii irraa dhorkamee, jijjiiramee, aangoo irraa bu’ee yookiin aangoo yookiin itti gaafatamummaa isaa erga dhiisee booda kan ittiin hojjate yoo ta’e;
Tumaan ifatti dhimmicha ilaallatu kan jiru yoo ta’e, malee akkahaala dubbichaatti hidhaa salphaa waggaa tokkoo gadi hintaaneen yookiin hidhaa cimaa waggaa kudhan hincaalleefi adabbii maallaqaan ni adabama.
2. Kaayyoon Itti gaafatamummichi yookiin dirqamichi akka cabu barbaadameef, baayyina faayidaa argamee, sadarkaa aangoo yookiin itti gaafatamummaa balleessicha yookiin cimina miidhaa nama dhuunfaa yookiin ummata yookiin mootummaa irratti qaqqabsiise akkaataa raawwii yakkichaa cimaa kan taasise yoo ta’e; adabbichi hidhaa cimaa waggaa torbaa hanga waggaa kudha shanii gahuu danda’uufi adabbii maallaqaa kuma shantamaa hincaallee ta’a.
3. Sababoota keewwata xiqqaa (2) jalatti tarreeffaman keessaa lama yookiin sanaa ol wal irra bu’uunii kan argaman yoo ta’e, adabbichi hidhaa cimaa waggaa kudhanii hanga waggaa digdamii shaniigahuufi adabbii maallaqaa qarshii kuma dhibba tokko hincaalle ta’a.
Keewwata 408. Matta’aa Fudhachuu
1. Hojjetaan mootummaa kamiyyuu itti gaafatamummaa yookiin dirqama hojii isaatiin waan raawwachuu hin qabne raawwachuuf yookiin waan raawwachuu qabu akka raawwachuu dhiisuuf kallattiinis ta’eealkallaatiin ofii isaaf yookiin nama biroof faayidaa akka kennamu kan gaafate, kan fudhate yookiin jecha waadaa kan fudhate yoo ta’e;
Hidhaa salphaa waggaa tokkoo gadi hintaane yookiin hidhaa cimaa waggaa kudhan hincaalleefi adabbii maallaqaa qarshii kuma digdama hincaalleen adabama.
2. Kaayyoon itti gaafatamummichi yookiin dirqamichi akka cabu barbaadameef, baayyina faayidaa argamee, sadarkaa aangoo yookiin itti gaafatamummaa balleessicha yookiin cimina miidhaa nama dhuunfaa yookiin ummata yookiin mootummaa irratti qaqqabsise akkaataa raawwii yakkichaa cimaa kan taasise yoo ta’e; adabbichi hidhaa cimaa waggaa torbaa hanga waggaa kudha shanii gahuu danda’uufi adabbii maallaqaa qarshii kuma shantamaa hincaallee ta’a.
4. Bu’uura keewwata kana keewwata xiqqaa (1) jalatti tumameen hojjetaan mootummaa kamiyyyuu, dirqama hojii gabaa addunyaalessaa waliin walqabateen korporeeshinoota daangaa biyyootaa darbuun hojjatan dabalatee mootummaa biyya biroo, nama yookiin dhaabbata kamiyyuu irraa faayidaa yookiin kennaa kan gaafate, kan fudhate, fudhachuuf kan waliigale yoo ta’e;
AdabbiileeKeewwatoota xiqqaa armaan olii jalatti tumaman keessaa tokkoon akka haala dubbichaatti ni adabama.
Keewwata 409. Faayidaa Hinmalle Fudhachuu
1. Hojjataan mootummaa kamiyyuu, bu’uura itti gaafatamummaa kennameefiin hojii raawwachuun irraa eegamu raawwachuuf jecha, hojiidhuma kana raawwachuu isaatiin dura yookiin erga raawwatee booda faayidaan akka kennamuuf kan gaafate, kan argate yookiin jecha waadaa kan fudhate yoo ta’e;
Akka haala dubbichaatti hidhaa salphaa waggaa tokkoo gadi hintaaneen, yookiin hidhaa cimaa waggaa torbaa hincaalleefi adabbii maallaqaa qarshii kuma kudhan hincaalleen adabama.
2. Ciminni faayidaa argamee, sadarkaan aangoo yookiin itti gaafatamummaa balleessicha raawwii yakkichaa cimaa kan taasise yoo ta’e,adabbichi hidhaa cimaa waggaa shanii hanga waggaa kudha shanii gahuu danda’uufi adabbii maallaqaa qarshii kuma soddoma hincaallee ta’a.
3. Yakkichi kan raawwatame qunnamtii daldalaa addunyaalessaa waliin walqabateen itti gaafatamummaa yookiin dirqama hojii hojjatamuun yoo ta’e, akka haala dubbichaatti bu’uura keewwatoota xiqqaa armaan olitti ibsamaniin ni adabsiisa.
Keewwata 410.Yakka Matta’aaFudhachuuJaarsoliin Araaraafi NamootniBirooRaawwatan
1. Jaarsi araaraa, abbaan seeraa araaraa, immaanyii, eegaan yookiin qulqulleessaan qabeenyaa, turjumaanni hojii isaa akka raawwatu abbaa aangootiin muudame yookiin turjumsiisaan yookiin abbaa seerummaan yookiin dhimmaa abbaa seerummaa waliin walqabatu irratti kallattii ogumma isaan yaada isaa yoookiin jecha ragumma isaa kan kennu ogeessi addaa kamiyyuu, waan raawwachuu qabu akka hinraawwanne yookiin waan raawwachuu hinqabne raawwachuuf nama dhimmichi ilaallatu irraa faayidaa yookiin kennaa akka kennamuuf kan gaafate yookiin kan fudhate yoo ta’e;
Seera kana keewwata 408 keewwatoota xiqqaa jalqabaa sadii jalatti adabbiilee ibsaman keessaa tokkoon akka haala dubichaan ni adabama.
2. Keewwata kana keewwata xiqqaa (1) jalatti namoota ibsaman keessaa tokko bu’uura aangoo yookiin gahee kennameefiin waan raawwachuu qabu raawwachuu isaan dura yookiin booda faayidaan yookiin kennaan akka kennamuuf kan gaafate yookiin kan fudhate yoo ta’e, seera kana keewwata 409 keewwatoota xiqqaa jalqabaa lama jalattiadabbiilee ibsaman keessaa tokkoon akka haala dubbichaatti ni adabama.
Keewwata 411. Hojii Mootummaa Haala Mijaawaa Hintaaneen Geggeessuu
2. Hojjataan mootummaa kamiyyuu faayidaa hinmalle argachuuf yookiin argamsiisuuf yaaduun, aangoo yookiin itti gaafatamummaa isaatti fayyadamuun:
(a) hojii daldalaa yookiin kan biraan, bittaan yookiin gurgurtaan,yookiin hojii raawwatuun walqabatee qunnamtii hojii kamiiniyyuu faayidaa dhuunfaa isaaf faayidaa akaakuu kamiiniyyuu kan fudhate yookiin waligaltee faayidaa kana ittiin argatu kan waliigale yookiin tooftaa biraa kan uume yoo ta’e;
(b) gatii qaama aangoo qabuun murtaa’e oliin waliigaltee meeshaa dhiyeessuu, waliigaltee hojii ijaarsaa yookiin waliigaltee hojii kamiiniyyuu kan raawwate yoo ta’e;
(c) bu’uura aangoohojii waliigalaa isaatiin faayidaa ummataa yookiin mootummaa imaanaan yookiin eeguufi kunuunsuun irraa eegamu gocha miidhu mala kamiiniyyuu kan raawwate yoo ta’e;
Akkaataa haala dubichaatti hidhaa salphaa waggaa tokkoo gadi hintaaneen yookiin hidhaa cimaa waggaa kudhan hincaalleefi adabbii maallaqaa qarshii kuma shantama hincaalle ni adabama.
3. Kaayyoon itti gaafatammumichi yookiin dirqamichi akkacabu barbaadameef, baayyiinni faayidaa argamee, sadarkaan aangoo yookiin itti gaafatamummaa balleessicha yookiin cimina miidhaa nama dhuunfaa yookiin ummata yookiin mootummaa irratti qaqqabsise akkaataa raawwii yakkichaa cimaa kan taasise yoo ta’e, adabbichi hidhaa cimaa waggaa torbaa hanga waggaa kudha shanii gahuu danda’uufi adabbii maallaqaa qarshii kuma dhibba tokko hincaallee ni ta’a.
4. Sababoota keewwata xiqqaa (2) jalatti tarreeffaman keessaa lama yookiin sanaa ol wal irra bu’uuniiyommuu argaman, adabbichi hidhaa cimaa waggaa kudhanii hanga waggaa digdamii shaniiga’uufi adabbii maallaqaa qarshii kuma dhibba lama hincaalle ta’a.
5. Raawwatichi yaada faayidaa argachuu yookiin argamsiisuu osoo hinqabaatiin:
(a) Jaarmiyaa ofii isaa yookiin firri isaa dhihoo yookiin michuun isaa abbaa faayidaa yookiin abbaa aksiyoonaa keessatti ta’eeyookiin hundessaa yookiin miseensa dhaabbata tola oolaa itti ta’eefi waajjira isaa jidduutti daldalaan yookiin hojii biraatiin, bittaan yookiin gurgurtaan, yookiin qunnamtii biroo raawwii hojii isaa waliin walqunnamtii qaban kamiiniyyuu waligaltee akka seenu kan taasise yoo ta’e yookiin;
(b) qabeenyota muraasa akka hinbinne yookiin caalbaasii akka hinhirmaanne seeraan yookiin dambiin dhorkamee osoo jiruu maqaa isaan yookiin maqaa nama biraan yookiin nama biraa waliin qabeenya kan bite yookiin caalbaasii irratti kan hirmaate yoo ta’e;
Hidhaa salphaan, yookiin hidhaa cimaa waggaa shan hincaallefi adabbii maallaqaan adabama. “Fira” jechuun bu’uura seera dhimmichi ilaallatuun himatamaa waliinnama firummaa dhiigaa yookiin ga’iila qabudha.
Keewwata 412. Mi’a Imaanaan Itti Kenname Irratti Seeraan Ala Ajajuu
1. Hojjataan mootummaa kamiyyuu seeraan osoo hinhayyamaminiif, ta’us, qabeenya dhuunfaa gochuuf yaaduun osoo hinta’in:
(a) wanta saamsamaa fuudhe, poostaa, sanada, wantoota gatii qaban yookiin imaanaan yookiin meeshaa akka saamsameen fuudhe kamiyyuu kan bane, kan bansiise, kan fudhate yookiin fudhachiise, yookiin oduu isaa kan ibse yookiin meeshicha dabarsee kan kenne yoo ta’e;
(b) mi’oota akka kanaatiin kan itti tajaajilame yookiin namni biroo akka itti tajaajilamu kan hayyame yoo ta’e;
Gochichi adabbii cimaan kan adabsiisu ta’uu isaa tumaa biraatiin kan ibsamne yoo ta’e malee, adabbii maallaqaa qarshii kuma torbaa hincaalleen yookiin hidhaa salphaa waggaa shan hincaalleen adabama.
2. Yakkichi kan raawwatame miira faayidaa argachuuf karoorfameen yoo ta’e;adabbichi hidhaa cimaa waggaa shan hincaalleefi adabbii maallaqaa ta’a.
3. Gochichi kan raawwatame dagannoon yoo ta’e; adabbichi adabbii maallaqaa qarshii kuma tokko hincaalle ni ta’a.
Keewwata 413. Yakka Fudhachuufi Miliqsuu Hojii Irratti Raawwatamu
1. Hojjataan mootummaa kamiyyuu, faayidaa qabeenya hinmalle argachuuf yookiin argamsiisuuf yaaduun:
(a) sakatta’iinsaan, qabiinsaan, sirna dhaalaan, gurgurtaa caalbaasiin, dhaala karaa seeraa raawwatamuun yookiin murtichi qabeenya irratti akka raawwatamu murtaa’uu isaan, yookiin hojii kana fakkaatu yommuu kamiyyuu yommuu raawwatamutti mi’oota, sanadoota, wantoota gatii baasan, maallaqa callaa, meeshaalee socho’an yookiin dhumataa kan fudhate yoo ta’e; yookiin
(b) sababa hojiisaan yookiin meeshaalee imaanan fuudhe yookiin kanneen harka isaa galuu danda’anyookiin meeshaalee kana fakkaatan yookiin wantoota gatii baasan kan miliqse yoo ta’e;
Akkaataa haala dubbichaattii hidhaa salphaa waggaa tokkoo gadi hintaaneen yookiin hidhaa cimaa waggaa kudhan hincaalleefi adabbii maallaqaan ni adabama.
2. Baayyin faayidaa argamee, sadarkaan itti gaafatamummaa yookiin aangoo balleesicha, yookiin ciminni miidhaa faayidaa nama dhuunfaa, ummata yookiin mootummaarratti qaqqabsiiseen akkaataa raawwii gochichaa cimaa kan taasise yoo ta’e; adabbbichi hidhaa cimaa waggaa torbaa hanga waggaa kudha shaniiga’uu danda’uufi adabbii maallaqaa qarshii kuma soddoma hincaalle ni ta’a.
3. Sababootni Keewwata kana keewwata xiqqaa (2) jalatti tarreeffaman lamaan isaanii yookiin sanaa ol wal irra bu’uun yoo argaman adabbichi hidhaa cimaa waggaa kudhanii hanga waggaa digdamii shaniigahuu danda’uufi adabbii maallaqaa qarshii kuma shanatama hincaalle ni ta’a.
Keewwata 414. Aangoon Daldaluu
1. Hojjataan mootummaa kamiyyuu dhagahamummaa sababa hojii isaan qabuun yookiin fakkeessee dhiyeesseen:
(a) sadarkaa hojii, muudama, hojii, badhaasa, gatii tajaajilaa, kennaa addaa qaama aangoo qabuun murtaa’ee kennamu;
(b) waliigaltee, walta’iinsa daldalaa, caalbaasii hojii, dhiyeessa meeshaa yookiin faayidaa biroo abbootii aangoo yookiin kutaalee bulchiinsaa to’annoo isa jala jiraaniin waliigaltee godhamu;yookiin
(c) akka waliigalaatti faayidaa yookiin murtii deeggarsaa qaama aangoo yookiin kutaa bulchiinsaan kennamu tokko irraa;
Nama biraatiif argamsiisuuf, kennaa yookiin faayidaa biroo kan gaafate yookiin kan fudhate yoo ta’e; akkaataa haala dubichaatti hidhaa salphaa waggaa tokkoo gadi hintaaneen, yookiin hidhaa cimaa waggaa kudhan hincaalleefi adabbii maallaqaa qarshii kuma soddomaa hin caalleen ni adabama.
2. Kaayyoon itti gaafatamummichi yookiin dirqamichi akka cabu barbaadameef, bayyiinni faayidaa argamee, sadarkaan aangoo yookiin itti gaafatamummaa balleessicha yookiin ciminni miidhaa nama dhuunfaa yookiin ummata yookiin mootummaa irratti qaqqabsise akkaataa raawwii yakkichaa cimaa kan taasise yoo ta’e; adabbichi hidhaa cimaa waggaa torbaa hanga waggaa kudha shanii gahuu danda’uufi adabbii maallaqaa qarshii kuma shantama hincaallee ni ta’a.
3. Sababoonni Keewwata kana keewwata xiqqaa (2) jalatti tarreeffaman lamaan isaanii yookiin sanaa ol wal irra bu’uunii yommuu argaman, adabbichi hidhaa cimaa waggaa kudhanii hanga waggaa digdamii shaniigahuu danda’uufi adabbii maallaqaa qarshii kuma dhibba tokko hincaalle ta’a.
Keewwata 415. Seeraan Ala Walitti Qabuu yookiin Dabarsanii Kennuu
1. Hojjataan mootumma kamiyyuu faayidaa hinmalle ofii isaaf argamsiisuuf yaaduun:
(a) Kaffalamuu kan hinqabne ta’uu isaa yookiin taarifa seeraan murtaa’ee ol ta’uu isaa beekaa ashuura, gibira, galii addaddaa yookiin faayidaa galii addaddaa, kaffaltii hojii guyyaa (wage),miindaa, beenyaa, yookiin baasii biroo kan walitti qabe yookiin akka walitti qabamu kan ajaje yoo ta’e;
(b) mi’a yookiin kaffaltii kamiiniyyuuyommuu raawwatu yookiin kennutti galchuu yookiin kaffaluu kan irraa eegamu irraa xiqqeessuun kan galii taasise yookiin kan kaffale yoo ta’e;
Akkaataa haala dubichaatti hidhaa salphaa waggaa tokkoo gadi hintaanen yookiin hidhaa cimaa waggaa kudhan hincaalleefi adabbii maallaqaa qarshii kuma kudha shan hincaalleen ni adabama.
2. Yakkichi kan raawwatame armaan olitti keewwata 414 jalatti haalawwan tumaman keessaa tokkoon yoo ta’e; adabbichi hidhaa cimaa waggaa torbaa hanga waggaa kudha shanii gahuu danda’uufi adabbii maallaqaa qarshii kuma soddoma hincaalle ni ta’a.
3. Yakkichi kan raawwatame armaan olitti keewwata 414 (3) jalatti haalawwan tumaman keessaa tokkoon yoo ta’e; adabbichi isaa hidhaa cimaa waggaa kudhanii hanga waggaa digdamii shanii gahuu danda’uufi adabbii maallaqaa qarshii kuma shantama hincaalle ni ta’a.
4. Yakkichi kan raawwatame dagannoon yoo ta’e; hidhaa salphaafi adabbii maallaqaan adabsiisa.
Keewwata 416. Seeraan Ala DhimmaLafa Irra Harkisuu
Hojjataan mootummaa kamiyyuu sababa itti gaafatamummaa yookiin hojii isaan dhimma dhiyaateef irratti faayidaa nama qabu kamiyyuurraa kallattiin yookiin alkallattiin faayidaa argachuuf, dhimmicha irratti faayidaa nama qabu kamiyyuu fayyaduuf yookiin miidhuuf jecha seeraan yookiin dambii yookiinqajeelfama hojii yookiin hojmaata baratameen ala sababa gahaa malee kan hinmurteessine yookiin kan turse yookiin abbaa dhimmaa kan dhamaase yoo ta’e;
Haalawwan dambiii darbuun kan isa adabsiisaniin ala yommuu ta’u, akka haala dubbichaatti adabbii maallaqaan, yookiin hidhaa salphaan yookiin hidhaa cimaa waggaa shan hincaalleen ni adabama.
Keewwata 417. Wanta Gatii Qabu Kafaltii Malee Yookiin Kaffaltii Gahaa Hintaaneen Argachuu
1. Hojjataan mootummaa kamiyyuu sababa gahaa osoo hinqabaatin kaffaltii malee yookiin kafaltii gahaa malee wanata gatii qabu kamiyyuu kan fuudhe yoo ta’e hidhaa salphaa waggaa shan hincaalleen adabama.
2. Qabeenya, humna faayinaansii yookiin kennaa fudhachuu galmeessisuu akka qabu seeraan yookiin dambiiidhaan kan tumame yoo ta’e beeksisuu dhiisuun yookiin galmeessisuu dhiisuun bu’uura keewwata kana keewwata xiqqaa (1) tiin ni adabsiisa.
3. Bu’uura aadaa yookiin haala baratamaa biyyichaa yookiin naannichaatiin kennaa gatii qabuufi akka mallattoo michummaa salphaatti ilaalamu fudhachuun yookiin fira dhiigaa dhiyoo yookiin fira gaa’ilaa yookiin michuu dhiyoo ta’e irraa kennaadhaan argachuun yakka keewwata kana jalatti ibsame kan hundeessu miti.
Keewwata 418. Seeraan Ala Hayyama Kennuufi Raggaasisuu
Hojjataan mootummaa kamiyyuu itti yaadee nama gahumsa hinqabneef yookiin seeraan nama kennamuufii hinqabne kamiifiyyuu hayyama daldalaa yookiin hojii kan kenne yookiin kan raggaase yoo ta’e yookiin iddoo waanti tokko itti raawwatamu seeraan ala kan hayyame yookiin kan kenne yoo ta’e akka haala dubbichaatti hidhaa salphaadhaan, yookiin hidhaa cimaa waggaa kudhan hincaalleen ni adabama.
Keewwata 419. Qabeenyafi Maallaqa Maddi Isaa Hinbeekamne
1. Namni hojjataa mootummaa ta’e yookiin ture kamiyyuu:
a. Galii sadarkaan jireenya isaa, kan amma irra jiru yookiin hojii mootummaa duraan keessa ture yookiin karaa biraa kan argatuun yookiin seeraan argachaa turee kan caalu yoo ta’e; yookiin
b. Qabeenyi inni qabu yookiin maddi maallaqaa isaa hojii mootummaa amma irra jiru yookiin duraan keessa ture yookiin karaa biraa kan argatuun yookiin karaa seera qabeeessa ta’een argachaa kan ture waliin kan wal hinmadaalle yoo ta’e;
Haala sadarkaa jireenya akkasii akkamiin qabaachuu akka danda’e yookiin qabeenyi yookiin maddi maallaqichaa haala kamiin harka isaa akka gale mana murtiitiif kan ibse yoo ta’e malee, akka haala isaatti dhaalamuun qabeenyichaa yookiin abbaa mirgaatiif deebi’uun isaa akkuma eegametti ta’ee; hidhaa salphaa yookiin adabbii maallaqaa yookiin dhimmichi cimaa yoo ta’e hidhaa cimaa waggaa shan hincaalleefi adabbii maallaqaatiin ni adabama.
2. Armaan olitti keewwata xiqqaa (1) jalatti yakki ibsame mana murtiitti ilaalaa yommuu jirutti namni tokko walitti dhiyeenya himatamaa waliin qabuun yookiin haalawwan biroo irraa ka’uun himatamaadhaaf abbaa imaanaa ta’uun qabeenya tokko yookiin madda maallaqaa akka qabate yookiin himatamaa irraa kennaadhaan akka argate manni murtii yoo itti amane dhimmicha ragaa biraatiin kan fashaleesse yoo ta’e malee, qabeenyichi yookiin maddi maallaqichaa abba qabiyyummaa himatamtichaa jala akka jirutti ni lakkaawama.
Yakkoota Dirqama Hojii Cabsuun Raawwataman
Keewwata 420. Dirqama Hojii Bahuu Dhabuun Yakka Raawwatamu
1. Hojjataan mootummaa kamiyyuu dirqama gahee hojii isaa akkaataa barbaadamuun raawwachuu hafuu isaatiin faayidaa mootummaa, ummataa yookiin nama dhuunfaa irratti miidhaa geessiseera yoo ta’e adabbii maallaqaa qarshii kuma tokko hincaalleen yookiin hidhaa salphaa ji’a jaha hincaalleen ni adabama.
2. Sababa yakkichaatiin miidhaa cimaan kan qaqqabe yoo ta’e hidhaan salphaafi adabbiin maallaqichaa hanga adabbii isaa ol’aanaa seeraan murtaa’ee qaqqabuu ni danda’a.
Keewwata 421. Korannaan /Sadoon/ Seeraan Alaa Hojii Dhaabuu
Hojjetaan mootummaa kamiyyuu haala faallaa seeraa ta’een yookiin faallaa ogummaa isaa ta’een hayyama isaatiin korannan /sadoon/ gocha hojii dhaabuu kan raawwate yoo ta’e yookiin gochi hojii dhaabuu akka raawwatamu kanneen biroo kan tuttuqe yoo ta’e; adabbiin keewwata 420 jalatti ibsame irratti ni raawwatama.
Keewwata 422. Aangoo Qabeenya Nama Biroo Sakatta’uu Yookiin QabuuttiSeeraan Ala Tajaajilamuu
1. Hojjataan mootummaa kamiyyuu seeraan aangoo osoo hinqabaatiin qabeenya namaa kan sakatta’e, kan qabe yookiin qabeenyicha kan fudhate yoo ta’e; hidhaa cimaa waggaa torba hincaalleen ni adabama.
2. Hojjataan mootummaa kamiyyuu sakatta’uufi qabuuf seeraan aangoon kan kennameef yoo ta’es humna barbaachisaa ol ta’e fayyadamuun gara mana yookiinmooraa nama biroo kan seene yoo ta’e, yookiin sirna seeraan ajajame yookiin hayyamameen ala qabeenya namaa kan sakatta’e, kan qabe yookiin kan fudhate yoo ta’e; hidhaa cimaa waggaa shan hincaalleefi adabbii maallaqaatiin ni adabama.
Keewwata 423. Karaa Seeraan Ala Ta’een Nama Qabuu Yookiin Hidhuu
Hojjataan mootummaa kamiyyuu haala seeraan ibsameen ala yookiin sirnaafi of eeggannoo seeraa osoo hin hordofiin nama biroo qabuun, hidhuun, yookiin haala kamiiniyyuu bilisummaa isaa kan dhabsiise yoo ta’e; hidhaa cimaa waggaa kudhan hincaalleefi adabbii maallaqaatiin adabama.
Keewwata 424. Mala Hojmaataa Hinmalleen Fayyadamuu
1. Hojjetaan mootummaa kamiyyuu gahee hojii qabuu, eeguu, to’achuu,dabaaluu, yookiin qorachuu yommuu gaggeessutti nama shakkame, qabame, ragummaan dhiyaate, mana murtiitti akka dhiyaate kan waamame, qabamee mana turmaataa yookiin hidhaa jiru, yookiin adabbii hidhaa raawwataa jiru ibsa tokko akka isaaf kennuufis ta’ee balleessaa isaa akka amanu, yookiin waan kana fakkaatu akka ibsuuf yookiin karaa inni barbaaduun jecha ragummaa akka kennuuf kan sossobe, jecha waadaa kan kenneef yookiin kan sodaachise yookiin nama kana irratti haala hinbarbaachisneen yookiin haala gara laafummaa namummaa qabuun ala yookiin gocha kabaja ilma namaatiif yookiin aangoo hojii isaa waliin walfaallessu kan irratti raawwate yoo ta’e, keessumattuu, reebicha, gocha gara jabummaa yookiin darara qaamaa yookiin sammuu kan irratti qaqqabsiise yoo ta’e;
Hidhaa salphaan, yookiin adabbii maallaqaan, yookiin dubbichi cimaa yoo ta’e, hidhaa cimaa waggaa kudhan hincaalleefi adabbii maallaqaatiin ni adabama.
Gochichi yakka biroo kan hordofsiise yommuu hordofsiisetti tumaan rogummaa qabu dabalataan akka irratti hinraawwatamne tumaan keewwata kanaa hindhorku.
2. Yakkichi kan raawwatame ajaja abbaa aangootiin yoo ta’e; abbaan aangoo kun hidhaa cimaa waggaa kudha shan hincaalleefi adabbii maallaqaatiin adabama.
Keewwata 425. Hidhamaa Karaa Seeraan Ala Ta’een Hiikuufi Akka Miliqu gargaaruu
1. Hojjataan mootummaa kamiyyuu:
(a) Karaa faallaa seeraa yookiin ajaja kennameefiitiin ala ta’een nama akkaataa seeraatiin hidhame yookiin qabameefi akka eegu itti kenname kan hiike yoo ta’e; yookiin
(b) Namni akkanaa kun akka miliqu kan taasise, kan hayyame yookiin akka miliqu kan gargaare yoo ta’e;
Hidhaa salphaa waggaa sadii hincaalleefi adabbii maallaqaa qarshii kuma sadii hincaallen ni adabama.
2. Malli yookiin haalli seeraan ala hiikuu yookiin miliquun ittiin raawwatame, miidhaan inni qaqqabsiise, ciminni sababa akka qabamu itti ajajame, yookiin balaafamummaan nama qabamee yommuu ilaalamu haalli isaaaddatti cimaa yoo ta’e; adabbiin isaa adabbii maallaqaa hanga fiixee ol’aanaa adabbii idilee gahuu danda’uufi hidhaa cimaa waggaa shan hincaalle ni ta’a.
3. Yakkichi dagannoon kan raawwatame yoo ta’e; adabbichi adabbii maallaqaa qarshii kuma tokkoofi dhibba shan hincaalleefi hidhaa salphaa waggaa tokko hincaalle ni ta’a.
Keewwata 426. Booji’amtoota Waraanaafi To’atamtoota Loltuu Hiikuufi Akka Miliqan Gargaaruu
1. Hojjataan mootummaa kamiyyuu booji’amtoota waraanaa yookiinto’atamtoota loltuu to’annaa isaa jala jiran haala faallaa seeraa yookiin ajajaatiin kan hiike yookiin akka miliqan kan gargaare yoo ta’e; hidhaa cimaa waggaa kudha shan hincaalleen ni adabama.
2. Yakkichi kan raawwatame dagannoon yoo ta’e; hidhaa salphaa waggaa lama hincaalleen ni adabsiisa.
Yakkoota Namoonni Biroo Hojii Mootummaarratti Raawwatan
Yakkoota Malaamaltummaa Namoonni Biroo Haala Hojii Mootummaatiin walqabateen Raawwatan
Keewwata 427. Matta’aa Kennuu
1. Namni kamiyyuu hojjetaan mootummaa tokko itti gaafatamummaa isaatiin yookiin dirqama hojii isaatiin wanta raaawwachuu hinqabne akka raawwatu yookiin wanta raawwachuu qabu akka hinraawwanne faayidaa yookiin kennaa kan kenne yookiin kan dhiyeesse yoo ta’e; hidhaa salphaan, yookiin akka haala dubbichaatti hidhaa cimaa waggaa torbaa hincaalleefi adabbii maallaqaa qarshii kuma kudha shan hincaallenni adabama.
2. Namni kamiyyuu dhimma daldala gabaa addunyaalessaa waliin walqabteen abbaa aangoo yookiin hojjataa mootummaa biyya biroo yookiindhaabbataaddunyaalessaa kamifiyyuu dirqama hojii isaatiin wanta raawwachuu hinqabne akka raawwatu yookiin wanta raawwachuu qabu akka hinraawwanne faayidaa yookiin kennaa kan kenne yookiin kan dhiyeesse yoo ta’e; bu’uura keewwata xiqqaa (1) jalatti ibsameen ni adabama.
3. Faayidaan yookiin kennaan raawwataan yakkichaa dhiyeesse ol’anaa yoo ta’e; yookiin gochichi mootummaa, ummata yookiin nama dhuunfaa irratti miidhaa cimaa kan qaqqabsiise yoo ta’e; adabbichi hidhaa cimaa waggaa shanii hanga waggaa kudha shaniigahuu danda’uufi adabbii maallaqaa qarshii kuma shantama hincaalle ni ta’a.
4. Hojjetaan mootummaa tokko bu’uura itti gaafatamummaa kennameefiin wanta raawwachuu qabu akka raawwatuuf jecha hojii isaa kanaraawwachuun dura yookiin erga raawwatee booda hojjataadhuma kanaaf faayidaa yookiin kennaa kan kenne yookiin kan dhiyeesse namni kamiyyuu; akka haala dubbichaatti adabbii maallaqaatiin yookiin hidhaa salphaan yookiin hidhaa cimaa waggaa shan hincaallen ni adabama.
5. Yakki armaan olitti keewwatoota xixiqqaa jalatti ibsame kan raawwatame dhaabbata namumman seeraa kennameefiin yoo ta’e; bu’uura keewwata 90 (3) tiin adabbii maallaqqaatiin ni adabama.
6. Adabbii keewwta kana jalatti ibsame irratti dabalataan manni murtichaa balleessichi mootummaa waliin waliigaltee yookiin bittaafi gurgurtaaakaakuukamiiniyyuu dhaabbataan yookiin yeroo murtaa’eef akka hin raawwanne ajaja dhorku kennuu ni danda’a.
Keewwata 428. Wanta Gatii Qabu Kaffaltii Malee Yookiin Kaffaltii Gahaa Hintaaneen Kennuu
Namni kamiyyuu haalawwan keewwata 417 jalatti ibsamaniin hojjetaa mootummaa kamiifiyyuu yookiin nama biroo isa waliin qunnamtii qabu kamiifiyyuu kaffaltii malee yookiin kaffaltii gahaa malee wanat gatii qabu kamiyyuu kan dhiyeesse, kan kenne yookiin kennuuf kan waliigale yoo ta’e; hidhaa salphaa waggaa shan hincaallen ni adabama.
Keewwata 429. Daddabarsuu
Namni kamiyyuu ofii isaatiiffaayidaa akaakuukamiiniyyuu argachuu yoo baates nama hojii mootummaa hojjatuuf matta’aa kennuuf maallaqa, wanta gatii qabu, tajaajila yookiin faayidaa akaakuu kan biroo nama biraa irraa kan fudhate yoo ta’e yookiin herreega baankii isaa matta’aa akkasii daddabarsuuf kan oolche yoo ta’e; akka haala dubbichaatti hidhaa salphaan, yookiin hidhaa cimaa waggaa kudhan hincaallee fi adabbbii maallaqaatiin ni adabama. Keewwata 430. Aangoo Hinqabnetti Fayyadamuu Namni kamiyyuu:
a. Hojii mootummaarraa erga dhorkamee, jijjiiramee, haqamee, geggeeffamee yookiin aangoo yookiin itti gaafatamummaa isaa erga dhiisee booda hojii isaa irra kan jiru fakkeessuun;
b. Gara fuula duraatti hojjataa mootummaa nan ta’a jedhee amanuun; yookiin
c. Hojjataa mootummaa osoo hinta’iin fakkaatee dhiyaachuun;kana nin raawwadha jechuun jecha waadaa galuun faayidaa yookiin kennaa hinmalle nama biroorraa yoo gaafate yookiin kan fudhate yoo ta’e ;
Akka haala dubbichaatti hidhaa salphaadhaan, yookiin hidhaa cimaa waggaa kudhan hincaalleen ni adabama.
Keewwata 431. Dhagahamummaa Duunfaan Daldaluu
Namni kamiyyuu hojjetaa mootummaa ta’uu dhabuu isaatiin hojjetaa mootummaatiif kan tumame (keewwata 414) kan isa hin ilaallanne yoo ta’es, kan qabu yookiin dhgahamummaa qabu yookiin akka qabu fakkeesse fayyadamuun mirga addaa yookiin faayidaa biroo hojjetaa mootummaa qofaan kennamuu danda’u nama biroof argamsiisuuf jecha maallaqa, kennaa, harka fuudhaa, yookiin faayidaa biraa kan gaafate, kan fudhate, yookiin kanuma ilaalchisee jecha waadaa kan fudhate yoo ta’e ;
Hidhaa salphaa waggaa tokkoo gadi hintaanen yookiin adabbii maallaqaa qarshii kuma lamaa gadi hintaaneen ni adabama.
Keewwata 432. Beeksisootaafi Seerota Mootummaa Sarbuu
Namni kamiyyuu aangoo yookiin mirga osoo hinqabaatin itti yaadee beeksisoota abbootiin aangoo iddowwan waltajjii uummataatti maxxansan, seerota yookiin murtiiwwan bakka isaaniitii kan kaase, kan balleesse, kan tarsaase, yookiin akka hin dubbifamne kan taasise yoo ta’e;
Hidhaa salpha ji’a jaha hincaalleen, yookiin adabbii maallaqaa qarshii kuma tokko hincaallaeen ni adabama.
Keewwata 433. Hayyamaan Ala Yookiin Hayyama Kennameen Ala Hojjachuu
Namni kamiyyuu hojiiwwanbu’uura seeraan yookiin dambiitiin hayyamni itti kennamuu qabu kamiyyuu hayyama malee yookiin hayyama kennameefiin ala kan hojjete yoo ta’e;
Akka haala dubbichaatti hidhaa salphaan yookiin adabbii maallaqaatiin yookiin hidhaa cimaa hanga waggaa shaniigahuu danda’uufi adabbii maallaqaatiin ni adabama.
Keewwata 434. Tumaalee Dirqama Galmeessisuu Ilaallatan Darbuu
1. Namni kamiyyuu fuudhaafi heeruma, du’a, qabeenya, hojiiwwan daldalaa yookiin kan biroo yookiin qabeenya hinsochoone kan namoota dhuunfaa, hundeeffamuu yookiin hojmaata kubbaaniyyootaa yookiin ijoowwan dubbii gochoota kana fakkaatanii yookiin mirkaneessaawwan kan galmeewwan mootummaa keessatti galmaa’uu qaqban yeroo murtaa’e keessatti abbootii aangoo dhimmi ilaallatutti osoo hin beeksisiin kan hafe yookiin kanuma sobaan kan galmeessise yoo ta’e ;
Hidhaa salphaa ji’a sadii hincaalleen, yookiin adabbii maallaqaa qarshii kuma tokko hincaalleen ni adabama.
2. Beeksisuu hafuun akkasii yookiin hojiin sobaan galmeessiisuu kun irra deddeebi’amee kan raawwatame yookiin akka amaleeffannaatti kan qabatame yoo ta’e; yookiin , ajaja,yookiin waraqaa waamichaa seera qabeessa abbaan aangoo dhimmi ilaallatu kenne mormuudhaan yoo ta’e adabbichi hidhaa salphaa ji’a jaha hincaalle yookiin adabbii maallaqaa qarshii kuma lama hincaalle ni ta’a.
3. Daa’ima godhachuu beeksisuu dhiisuu ilaalchisee tumaan jiru kan eegame dha. (Keewwata 656) Keewwata 435. Mariiwwan Yookiin Sanadoota Mootummaa Akka Hinibsamne Dhorkaman Ibsuu
Hidhaa salphaa waggaa sadii hincaalleen yookiin adabbii maallaqaatiin ni adabama.
Keewwata 436. Karaa Seeraan Ala Ta’een Mirga Kabachiisuu
Namni kamiyyuu osoo mirga hinqabaatiin yookiin karaa faallaa seeraa ta’een:
(a) meeshaa qabsiisaan yookiin wabummaan kenne osoo namni harkaa fuudhe hin hayyamiiniif yookiin sababuma meeshaa kanaan himanni dhiyaatee falmiirra osoo jiruu kan fudhate yoo ta’e;
(b) kaffaltii kaffalamuufii qabu argachuuf jecha qabeenya abbaa idaa ta’e mi’a socho’aa kamiyyuu kan irraa fudhate yoo ta’e; yookiin
(c) Akkuma walligalaatti mirga hin qabne yookiin bu’uura seeraatiin ittiin hojjachuu hin dandeenye kan itti fayyadame yoo ta’e;
Hidhaa salphaa waggaa tokko hincaalleen yookiin adabbii maallaqaa qarshii kuma shan hin caalleen adabama.
Keewwata 437. Aangoo Seeraan Ala Qabachuu
1. Namni kamiyyuu, kaayyoo seeraan ala ta’eef, yookiin faayidaa argachuuf yookiin argamsiisuuf yaaduun aanggoo abbaa aangoo yookiin koomishinii tokkoo, mallattoo addaa, gonfa yookiin ajaja ofiseelaa ta’e kennuu aangoosaa gochuun kan itti tajaajilame yoo ta’e;
Hidhaa salphaa waggaa tokko hincaalleen yookiin adabbii maallaqaa qarshii kuma tokko hin caalleen ni adabama.
2. Yakkichi kan raawwatame nama biroorra badii raawwachuuf, yookiin miidhaan akka irra qaqqabu taasisuuf yoo ta’e, adabbichi hidhaa salphaa yookiin adabbii maallaqaa ni ta’a.
Keewwata 438. Hojii Mootummaa Gufachiisuufi Dirqama Deeggarsaa Cabsuu
Namni kamiyyuu haala hojii mootummaa waliin walqabteen, bu’uura seeraan hayyamameen yookiin ajaja mana murtiitiin kennameen hojjataa mootummaan yommuu gaafatamu dhiyaatee ibsuuf, deebii barbaachisaa kennuuf, sanadoota dhiyeessuuf yookiin qorachiisuuf yookiin manneen, iddoowwan yookiin wantoota adda addaa sakattaasisuuf kan dide yoo ta’e; walumaagalatti qorannaf kan hin attoomne yoo ta’e yookiin karaa biroo kamiinuu hojii mootumma kan gufachiise yoo ta’e; hidhaa salphaa waggaa shan hincaalleen yookiin adabbii maallaqaan ni adabama.
Keewwata 439. Samsama Tarsaasu, Cabsufi Mi’oota Fudhachuu Namni kamiyyuu aangoo seeraa osoo hin qabaatiin itti yaadee:
(a) mi’a, barreeffama yookiin sanada tokko eeguuf, kaa’uuf, addaan baasuuf yookiin haguuguufyookiin gara iddoo kamiittuu galuu dhorkuuf chaappaa, mallattoo yookiin mallattoo addaa ofiseelaa taasifame kan kaase, kan balleesse yookiin kan cabse yookiin karaa kamiiniyyuu chaappaan, mallattoon, yookiin mallattoon addaa akkasii bu’aa akka hin arganne kan taasise yoo ta’e; yookiin
(b) mi’a, barreeffama yookiin sanada qabame, dhaalame yookiin sababa kamiiniyyuu abbaa aangoo yookiin nama biraatiin of eeggannoon akka qabamu yokiin eegamu itti kenname kan hate, faayidaa dhuunfaa isaa irra kan oolche, kan mancaasee yookiin kan balleesse yoo ta’e;
Hidhaa cimaa waggaa shan hin caalleen yookiin adabbii maallaqaa qarshii kuma kudhan hin caalleen ni adabama.
Keewwata 440. Mormuufi Ajajamuu Diduu
1. Namni kamiyyuu sababa gahaa osoo hinqbaatiin:
(a) hojjataan mootummaa dirqama hojii ofiseelaa ta’e raawwatu hojii isaa akka hin raawwanne kan morme yoo ta’e;
(b) walgahii seeraan alaa irraa akka bittinnaa’u yookiin iddoo dhorkamaa tokkoorraa akka gadi lakkisu, yookiin gubaatiin, dambaliin yookiin sababa tatee biroo kan fakkaatuun ummata irra balaan akka hin geenyeittisuuf tarkaanfii fudhatamu irratti akka hirmaatu hojjataan mootummaa hojii isaa raawwachaa jiruun yommuu gaafatamu hin ajajamu kan jedhe yoo ta’e; yookiin
(c) bu’uura seeraanmurtii abbaa aangoo dhimmi ilaallatuun kennamee raawwachuu yoo baate, keewwata kana jalattiadabbiin tumamee kan itti murtaa’u ta’uun isaa of eeggannoon barbaachisaa kennameefii osoo hin raawwatiin kan hafe yoo ta’e;
Hidhaa salphaa waggaa tokko hin caalleen yookiin adabbii maallaqa qarshii kuma tokko hin caalleen ni adabama.
2. Mormichi yookiin ajajamuu diduun humna, dhaadannaa, hojii humnaa yookiin harka darbuu kan hordofsiise yoo ta’e; tumaan Keewwata 441 jalatti ibsame raawwatamaa ni ta’a.
Keewwata 441. Gocha Humnaafi Dirqisiisuu
(a) hojjataan mootummaa tokko gocha dirqama hojii isaa ta’e akka hin raawwanne dhadannaan, dirqisiisuun, yookiin gocha humnaan kan gufachiise yookiin dirqama isaa kana akka hinraawwanne yookiin wanta raawwachuu hin qabne akka raawwatu kan dirqisiise yoo ta’e; yookiin
(b) hojjataa mootummaa yookiin nama hojiin isa deeggaru kan reebe yookiin gocha humnaa yookiin dirqisiisuu yookiin gocha humnaa kan biroo kan irratti raawwate yoo ta’e;
Hidhaa salphaa waggaa sadii hin caalleen yookiin adabbii maallaqaa qarshii kuma shan hin caalleen ni adabama.
2. Akka cimina badichaafi sadarkaa hojii miidhamtichaatti,miidhamtichi meeshaa waraanaan yookiin meeshaa kan biroon itti dhaadatame, dirqisiifame yookiin tumame yoo ta’e; adabbichi hidhaa cimaa waggaa shan hin caalle ni ta’a.
3. Harka darbuun yookiin gochichi humnaa miidhamticharratti miidhaa qaamaa yookiin hir’ina fayyaa kan hordofsiise yoo ta’e;tumaanroga qabeessi yakkoota dachaailaallatu raawwatamaa ni ta’a.
Keewwata 442. Gocha Gamtaan Raawwatamu
Dhaadannaan, dirqisiisuun, yookiin gochi humnaa waltajjii ummataa dhorkametti yookiin jeequmsaan kan raawwatame yoo ta’e; tumaaleen dhimmi ilaallatu dabalataan ni raawwatamu /Keewwata 484 fi 488/.
Yakkoota Bulchiinsa Haqaarratti Raawwataman
Yakkoota Adeemsa Hojii Abbaa Seerummaa Irratti Raawwataman
Keewwata 443. Yakka Beeksisuu Dhabuu
1. Namni kamiyyuu sababa gahaa osoo hin qabaatiin:
(a) yakki du’aan yookiin hidhaa cimaa umuriiguutuun adabiisu raawwatamuu isaa yookiin eenyummaa yakkamtichaa osoo beekuu abbootii aangoo dhimmi ilaallatutti osoo hin beeksisiin kan hafe yoo ta’e; yookiin
(b) seeraan yookiin dambiilee ogummaan tasgabbii ummataa yookiin nageenyaafi sirnaaf jecha yakkoota tokko tokko yookiin haalawwan ciccimoo tokko tokko abbootii aangoo dhimmi ilaallatutti beeksisuuf dirqama osoo qabuu dirqama isaa osoo hin raawwatiin kan hafe yoo ta’e;
Adabbiimaallaqaa qarshii kuma tokko hin caalleen yookiin hidhaa salphaa ji’a jaha hincaalleen ni adabama.
2. Seera kana keewwata 254 fi 335 jalatti kan tumaman kan eegamanittidha.
Keewwata 444. Yakka Eertotaafi Ragaa Baatota Irratti Raawwatamu
1. Namni kamiyyuu, yakka ilaalchisee qaamota haqaaf nama eeruu yookiin odeeffannoo kennerratti yookiin nama ragummaaf dhiyaate irratti hubaatii, dhiibba yookiin miidhaa kamiiniyyuu kan qaqqabsiise yoo ta’e; hidhaa salphaan yookiin adabbii maallaqaan ni adabama.
2. Yakkichi miidhamaarra miidhaa qaamaafi fayyaa cimaa ta’e yookiin du’a kan hordofsiise yoo ta’e; tumaaleen rugummaa qaban dhimma kana ilaallatan dabalataan raawwatamoo ni ta’u.
Keewwata 445. Dhoksuufi Garqaaruu
Namni kamiyyuu beekaa nama yakkaan himatamu dursee akeekkachiisuunis ta’e dhoksuun yookiin meeshaa yakkicha ittiin raawwate yookiin faana isaa dhoksuun yookiin balleessuun qorannoo taasifamu dogongorsiisuun yookiin karaa biraa kamiiniyyuu himatamee akka hin dhiyaanne kan gargaare yoo ta’e; Hidhaa salphaan yookiin adabbii maallaqaan ni adabama.
Keewwata 446. Hojii Haqaa Dogongorsuu
(a) kan hin raawwatamne ta’uu isaa osoo beekuu yakki tokko raawwatameera jechuun sobaan abbootii aaangootti kan beeksise yookiin sababa kamiiniyyuu yoo ta’e yakka ofii isaatiif hin raawwanne raawwadheera jechuun kan of himate yoo ta’e;yookiin
(b) qorannoo yakkaa yookiin adeemsa himannaa ilaalchisee osoo beekuu odeeffanoo sirrii hin taane abbootii aangootiif kan kenne yoo ta’e;
Hidhaa salphaa ji’a jaha hin caalleen yookiin adabbii maallaqaa qarshii kuma tokko hincaalleen ni adabama.
Keewwata 447. Sobaan Yakkuu Yookiin Himachuu
(a) qulqullummaa nama biraa osoo beekuu yakka inni hin raawwanneen abbaa aangoo biratti kan isa yakke yoo ta’e; yookiin
(b) mala biraa kamiinuu, keessumattuu, nama qulqulluu ta’e yakka hin raawwanneen akka himatamu karoorsee yakki kan raawwatame fakkeessuun yookiin maqaa isaa osoo hin ibsiin gocha yakkaa sirrii hintaaneen nama biraa kan himate yoo ta’e;
Hidhaa cimaa waggaa shan hincaalleefi adabbii maallaqaatiin ni adabama. Ta’us, yakkuun sobaan dhiyaate nama sobaan yakkame irratti adabbii armaan olitti ibsame caalu kan hordofsiise yoo ta’e, hanga adabbii nama qulqulluu irratti murata’een ni adabama.
Keewwata 448. Haqaaf Deeggarsa Kennuu Diduu
1. Manni murtii yookiin qaamni aangoo abbaa seerummaa waliin walfakkaatu qabu dhimma qabate irratti himatamtummaan, ragummaan yookiin raga ogeessaa addaa ta’uun yookiin turjumaanummaan, naqaashummaan yookiin qeeqxummaan akka gargaaru bu’uura seeraan kan waamame yookiin himatamaa yookiin ragaa akka dhiyeessu yookiin akka ergu kan ajajame namni kamiyyuu:
(a) sababa gahaa osoo hinqabaatiin osoo hin dhiyaatiin kan hafe yookiin dhiyaachuu kan dide yoo ta’e;
(b) himatamaa yookiin ragaa kan hindhiyeessine yookiin kan hin ergine yoo ta’e; yookiin
(c) dhiyaatee haala faallaa seeraa ta’een gaaffii gaafatameef deebii kennuu yookiin akka ajajameetti raawwachuuf hayyamamaa kan hin taane yoo ta’e;
Hidhaa salphaa ji’a lama hincaalleen yookiin adabbii maallaqaa qarshii kuma tokko hin caalleen adabama.
2. Balleessichi haala keewwata xiqqaa 1 jalatti ibsameen yakka raawwaten ilaalchisee sababni inni dhiyeesse soba ta’ee kan argame yoo ta’e; hidhaa salphaa ji’a sadii hincaalleefi adabbii maallaqaan adabama.
3. Namumti kun sababa sobaa dhiyeessuun dirqama isaa irraa kan of hambise yoo ta’e, yakka waliin dhahuu raawwateen adabbiin hidhaa salphaa irra gahuu qabu hanga fiixee adabbii idilee gahuu kan danda’u yoo ta’u,keessumattuu, sanda yookiin waraqaa ragaa sobaan yommuu fayyadamettidambiiin adabbii murtaa’u akkuma eegamettidha.
4. Yakkichi kan raawwatame mana murtiitti yookiin qaama aangoon abbaa seerummaa kennameef kan biroo duratti yoo ta’e, manni murtichaa yookiin qaamni aangoon abbaa seerummaa kennameef kan biro sun beellama osoo hin kennin battalumatti adabbii armaan oliitti ibsame murteessuu ni danda’a.
Keewwata 449. Mana Murtii Jeequu
2. Namni kamiyyuu yommuu mana murtiitti qorannoon gaggeeffamu yookiin hojiin murtii yommuu geggeeffamutti :
(a) mana murtichaa yookiin abbaa seeraa hojii abbaa seerummaa raawwataa jiru haala kamiiniyyuu kan arrabse, kan jeeqe yookiin isaan irratti kan baace yookiin kan dhaadate yoo ta’e; yookiin
(b) hojii mana murtichaa karaa kamiiniyyuu kan jeeqe yoo ta’e;
Hidhaa salphaa waggaa tokko hincaalleen yookiin adabbii maallaqaa qarshii kuma sadii hincaalleen ni adabama.
Manni Murtichaa beellama osoo hin kennin battalumatti adabbii murteessuu ni danda’a.
3. Yakkichi kan raawwatame dhaddachaan ala ta’ee yommuu abbaan seerichaa hojii isaa raawwachaa yommuu jirutti yoo ta’e, adabbichi hidhaa salphaa ji’a jaha hincaalle yookiin adabbii maallaqaa qarshii kuma tokko hin caalle ni ta’a.
4. Yakkichi kan raawwatame dhaddacha irratti yookiin iddoo kamittiyyuu yeroo hojiin abbaa seerummaa raawwatamuttita’ee humnaan yookiin dirqisiisuun yoo ta’e, tumaan rogummaa qabu /Keewwata 441/ dabalataan ni raawwatama.
Keewwata 450. Iccitii Adeemsa Murtii Ibsuu
1. Namni kamiyyuu hayyama seeraa yookiin sababa dhiifama kennisiisuu danda’u osoo hin qabaatiin ijoo dubbii haala isaatiin iccitii ta’e yookiin manni murtii dhimmichi dhiyaateef dhimmichi iccitii ta’ee akka eegamu kan murteesseefi adeemsa murtii dhimmichaa irratti sababa argameef beeke kamiyyuu kan ibse yoo ta’e;
Hidhaa salphaa ji’a jaha hincaalleen yookiin adabbii maallaqaa qarshii dhibba shan hin caalleen ni adabama.
2. Baleessichi yakkicha kan raawwate hojii ogummaa dhuunfaa isaan yookiin sababa hojjataa ta’uu isaan iccitii argate ibsuun yoo ta’e; tumaaleen rogummaa qaban /Keewwata 397399/raawwatamoo ni ta’u.
Keewwata 451. Adeemsa Murtii Ilaalchisee Gabaasa Sirrii Hin Taanee Yookiin Dhorkamee Ibsuu.
1. Namni kamiyyuu, dhimmoota mana murtiitti beellamarraa yookiin dhagahamaa jiran yookiin murtii hin argannee ilaalchisee odeeffannoo, yaadannoo, ijoo dubbii yookiin gabaasa sirrii hin taane yookiin kan dabe kan ibse yoo tae;
Adabbii maallaqaa qarshii dhibbaa shan hin caalleen yookiin dubbichi ulfaataa yommuu ta’etti, keessumattuu yaadi hawaasichaa akka jeeqamu yookiin nama biroo irratti miidhaan akka gahu taasisuuf kan danda’u yommuu ta’u; hidhaa salphaa ji’a jaha hin caalleen ni adabama.
2. Dhimma seeraan yookiin ajaja mana murtiin dhorkame ibsuun kan adabsiisu tumaa rogummaa qabuun ta’a/Keewwata 435/.
Akkaataan ibsi itti raawwatame seeraa alaafi dogoggora yoo ta’eefi gochichi yaadamee kan raawwatame yommuu ta’u, manni murtichaa bu’uura yakkoota dacha ilaalchisee tumameen adabbicha ni cimsa/Keewwata 184/.
Hojii Dhugummaa fi Amanamummaa Adeemsa Hojii Haqaaf Taasifamuu Qabu Irratti Yakka
Keewwata 452. Jecha Sobaa Gareen Falmaa Tokko Kennuu
1. Gareen falmii kamiyyuu mana murtiitti yookiin qaama aangoo abbaa seerummaa fakkaatu qaban biratti dhihaatee dhugaa akka dubbatu ajajamee mana murtichaan yookiin qaama aangoo abbaa seerummaa fakkaatu qabuun ijoo murtaa’u irratti ijoowwan dubbii rogummaa qaban ilaalchisee osoo beekuu jecha sobaa kan kenne yoo ta’e;
Bu’aa inni barbaadu osoo hin argamin yoo hafellee, hidhaa salphaa waggaa tokko hin caalleen; yookiin jecha sobaa kan kenne adeemsa himannaa yakkaa irratti ta’ee murtii haqadhabeessa ta’e kan hordofsiisuu danda’u yoo ta’e; hidhaa cimaa waggaa sadii hin caalleen ni adabama.
2. Gareen falmataan sun dhugaa dubbachuuf kakatee yookiin mirkaneessa kan kennee yoo ta’e, keessumattuu bu’aan barbaadame gartokkeen yookiin guutummaatti kan argame yoo ta’e; Addabbichi hidhaa cimaa waggaa shan hin caallee ni ta’a.
3. Gareen falmataan faayidaa isaa eegsisuuf jecha falmii sirrii hin taane dhiyeessuuf tumaaleen keewwata kanaa raawwatamoo hin ta’anu.
Keewwata 453. Ragummaa, Yaada Yookiin Hiika Sobaa.
1. Sirni abbaa seerummaa yookiin abbaa seerummaa fakkaatu yommuu gaggeeffamu namni ragaa ta’ee dhiyaate kamiyyuu garee falmataa kamiyyuu fayyaduuf yookiin miidhuuf yaadee ragummaa sobaa yookiin yaada ogummaa addaa kan kenne yoo ta’e, yookiin dhugaa kan dhokse yoo ta’e; Yadni
inni karoorfate galma kan hin geenyeef yoo ta’ellee; hidhaa salphaan yookiin; dubbichi ulfaataa yommuu ta’etti hidhaa cimaa waggaa shan hincaalleen ni adabama.
2. Ragichi dhugaa dubbachuuf kakatee yookiin mirkaneessa kennee yoo ta’e, keessumattuu bu’aan barbaadame gartokkeen yookiin guutummaan kan argame yoo ta’e; adabbichi hidhaa cimaa waggaa kudhan hin caallee ni ta’a.
Ta’us, sababa gocha ragichaan himatamaa dhimmaa yakkaa irratti murtiin balleessummaa kan kenname yoo ta’e; yookiin hidhaa cimaan waggaa kudhanii olii kan itti murtaa’e yoo ta’e hangi adabbii dogongoraan nama ragaaan irratti ba’ame irratti murtaa’e sun ragicha ragummaa sobaa kenne irratti murtaa’uu ni danda’a.
3. Qaama aangoo abbaa seerummaa yookiin aangoo abbaa seerummaa fakkaatu qabuun ijoo murtaa’uun ijoo dubbii rogummaa qabu irratti turjumaanni yookiin turjumsiisaan hiika sobaa kennuu kamiyyuu akkuma dhimmichaatti adabbiin armaan olitti keewwata xiqqaaa(1) yookiin (2) jalatti ibsame itti murta’a.
4. Ragummaan yookiin yaadni ogummaa addaa soba, sobaan hiikuun yookiin hiiksisuun isa irra ga’amee murtii manni murtii yookiin qaamni aangoo abbaa seerummaa fakkaatu qabu kennu irratti dhiibbaa geessisuu kan hin dandeenye yoo ta’e, adabbichi hidhaa salphaa waggaa lama hin caalleen ni ta’a.
Keewwata 454. Jecha Sirreessuu Yookiin Jijjiiruu
Ragummaan yookiin yaadni ogummaa addaa soba, sobaan hiikamuun yookiin hiiksisuun nama biroo irratti miidhaa geesisuu fi murtiin dhumaa kennamuun dura balleessichi fedhii isaatiin jecha isaa kan sirreesse yookiin kan jijjiree yoo ta’e, manni murtichaa haala addaatiin adabbicha ni salphisaaf /Keewwata 180/.
Yakkichi yookiin balaan yakkichi hordofsisuu salphaa ta’ee gochi sirreessuu yookiin jijjiiruu kan raawwatame yaada qulqullinaatiin yoo ta’e, akkuma haala dubbbichaatti balleessicha dheekkamuu fi akkeekkachiisa kennuufiin manni murtichaa adabbii biroo kamiyyuu irra bilisa isa taasisuu ni danda’a.
Keewwata 455. Kakaasuu fi Sossobuu
1. Namni kamiyyuu kennaan, abdiin, dhaadannaan, dabaan yookiin gowwomsuun, dhaga’amummaa isan sossobuun yookiin tooftaa biroo kamiiniyyuu nama biroo qaama dhimmi ilaallatu biratti, adeemsa abbaa seerummaa yookiin abbaa seerummaa fakkaatu irratti sobaan akka yakkuu,ragaa akka ba’u, yookiin gabaasa, hiikaa yookiin iyyannoo sobaa akka dhiyeessu kan kakaase yookiin kan sosoobe yoo ta’e;
Haalli raawwannaafi amala isaa yakka kakaasuu ilaalchisee kutaa waliigalaatiin /keewwata 36/ bu’uura tumameen kan isa adabsiisu yoo ta’e malee hojiin inni karoorfate kan hin raawwatamne yoo ta’ellee hidhaa salphaan ni adabama.
2. Namni kamiyyuu gocha humnaa hojjechuun, gocha dhaadannaa yookiin sodaachisuu raawwachuun, yookiin faayidaa hin mallee kennuun yookiin dhiyeessuun yakkota hidhaa cimaa waggaa lamaa olin adabsiisan irratti himannaan sobaa akka dhiyaatu yookiin ragummaan sobaa akka kennamuu kan taasise yookiin kenniinsa ragummaa yookiin ragaa walitti qabuu irratti gidduu seenuun kan gufachiise yoo ta’e; yookiinhojjetaa mootummaa hojii seera kabachiisuu yookiin hojii idileeisaarratti bobba’egidduu seenuun kan jeeqe yoo ta’e;
Hidhaa cimaa waggaa torba hin caalleen ni adabama.
Keewwata 456.Waliin Dha’uuYeroo Falmii
Namni Kamiyyuu, dhimmoota armaan olitti ibsamaniin ala adeemsa hojii abbaa seerummaa yookiin kan abbaa seerummaa fakkaatu irratti faayidaa qabatamaa yookiin kan miiraa (moral) argachuuf; haala fayyadu yookiin miidhuun kenniinsa murtii irratti dhiibbaa uumuuf karoorfatee, mana murtii yookiin qaama aangoo abbaa seerummaa fakkaatu qabu dogongorsuuf, ragaa gufachiisuuf, yookiin adeemsa murtii sirri dabsuu yaaduun:
(a) sanada mirkaneessa abbaa qabeenyummaa nama biroo ta’e, sanda yookiin ciraa yookiin ragaa balleessitummaa akaakuu kamiiniyyuu kan dhokse, hate, balleesse, mancaasee yookiin gartokkeenis ta’e guutummaan akka hin taajaajille kan taasise yoo ta’e; yookiin
(b) haala bakkawwanii, mi’ootaa yookiin namootaa kan dhokse, kan fooyyeesse, kan mancaase yookiin kan jijjiire yoo ta’e;
Yakkichi tumaa biroon adabbii ol’aanaa ta’e kan adabsiisu yoo ta’e malee;
Hidhaa salphaa, yookiin yakkichi cimaa yommuu ta’etti hidhaa cimaa waggaa torba hin caalleen ni adabama.
Keewwata 457. Gocha Oduu IbsuuAdeemsa Haqaa Dabsuuf Dabaan Raawwatamu
Namni kamiyyuu, dhimma mana murtiitti dhihaatu yookiin mana murtiitti ilaalamaa jiru irratti himatamticha yookiin miiltoo isaa akeekkachiisuunis ta’ee abbaa seeraa, ragaa namaa, ragaa ogeessa addaa, yookiin walumaagalatti gargaaraa hojii mana murtii irratti miira dogoggora geessisuuf karaa dogongora ta’een murtii akka kennuuf dhiibbaa geessisuuf yaaduun, sirrii kan hintaane yookiin kan dogoggorsu ijoo dubbii kan dabsu oduu, yaadannoo, yaada ijoo, qeeqa, gabaasa yookiin paampileetii (barreeffamoota xixiqqoo) karaa kamiiniyyuu kan ibse yookiin kan tamsaase yoo ta’e;
Adabbii maallaqaa qarshii kuma tokko hincaalleen; yookiin hidhaa salphaa ji’a jaha hincaalleen ni adabama.
Keewwata 458. Faayidaa Garee Falmataa Tokko Irratti Gocha Ganuu Raawwatamu
1. Abukaatoon, dubbi fixaan yookiin gorsaan seeraa kamiyyuu mana murtiitti yookiin qaama aangoo abbaa seerummaa fakkaatu qabu duratti dhiyaatee falmii akaakuu kamiyyuu akkafalmu karaa seera qabeessa (ooffiseelaa) ta’een yookiin dhimma abbaa dhimmichaan bakka itti buufame fayidaa garee bakka isaa buufatee aarsaa gochuun yookiin dhimma tokko irratti dhimma garee wal faalmitootaa lamaanii walitti qabee hojjechuun osoo beekuu dhimmicha kan jalaa balleesse yoo ta’e; Hidhaa salphaafi adabbii maallaqaan ni adabama.
2. Balleessichi yakkicha kan raawwate garee mormaan walii galuun yoo ta’e, adabbiin hidhaa sanaa hidhaa salphaa waggaa tokko gadii ta’uu hindanda’u. Yakkicha kan raawwate jaalala maallaqaan yookiin faayidaa qabatamaa argachuuf yoo ta’e; adabbiin maallaqaa hanga qarshii kuma dhibba tokkoo gahuu ni danda’a.
Yaakkichi kan raawwatame adabbii du’aa yookiin hidhaa cimaan umurii guutuutiin yakka adabsiisuun nama himatame irratti haala miidhaa geessisuun yoo ta’e; adabbichi hidhaa cimaa waggaa kudhan hin caalle ni ta’a.
3. Yakki keewwata xiqqaa(1) jalatti ibsame kan raawwatame dagannoon yoo ta’e;
Hidhaa salphaa ji’a sadii hincaalleen yookiin adabbii maallaqaa qarshii kuma shan hincaalleen ni adabsiisa.
Raawwii Murtii Yakkaa IrrattiYakkoota Raawwataman
Keewwata 459.Adabbiilee Dabalataa,Tarkaanfilee Eeggannoo Ittisaafi Eeggumsa Kabajuu Dhabuu.
Namni Kamiyyuu adabbii dabalataa mirgaa irraa mulqamu /Keewwata 123/ yookiin tarkaanfii eegannoo/Keewwata 141-154/ erga itti murtaa’ee booda osoo beekuu dhorkaa yookiin dirqama seeraan itti murtaa’e kan cabse yoo ta’e;
Keewwata biroon adabbii ol’aanaa kan adabamu yoo ta’e malee/Keewwata 465/;
adabbii maallaqaa qarshii dhibba tokko hin caalleen yookiin badichi ulfaataa yommuu ta’u hidhaa salphaa ji’a tokko hin caalleen ni adabama.
Keewwata 460. Adabbiifi Tarkaanfilee Eeggannoo Gufachiisuu
Namni kamiyyuu adabbiifi tarkaanfii eeggannoo mana murtiitiin yakkamaa tokko irratti murtaa’e haala kamiiniyyuu akka hinraawwatamne kan taasise yoo ta’e;
Keewwata 461. Miliquu Hidhamaa
1. Namni Kamiyyuu akkaataa seeraan qabamee yookiin hidhamee iddoo jiruu kan miliqe yoo ta’e; Hidhaa salphaa ji’a jaha hincaalleen ni adabama.
2. Yakkichi kan raawwatame namoota irratti gocha dhaadachuu yookiin humnaa raawwachuun yookiin qabeenya irratti miidhaa geessisuun yoo ta’e;
Hedhaa salphaa waggaa sadii hincaalleen ni adabsiisa.
3. Balleessichi yakka duraatiin kan itti murtaa’e yookiin murtaa’u yoo ta’e waa’ee yakkoota dacha yookiin irra deddeebii tumaaleen ilaallatan akkuma haala isaatti raawwatamoo ni ta’u.
Keewwata 462. Hidhamaan Akka Miliqu Mijeessuufi Gargaaruu
1. Namni kamiyyuu hojjetaa mootummaa osoo hin ta’in/Keewwata 402/ namni akkaataa seeraatiin qabame yookiin hidhame akka miliquuf gocha humnaan, dirqisiisuun, dhaadannaan, dabaan, fudhatamummaa dhuunfaa isaatiin garmalee tajaajilamuun yookiin tooftaa biroo kamiiniyyuu karaa kan mijeessee yookiin kan gargaare yoo ta’e; Hidhaa salphaan ni adabama.
2. Adabbichi hidhaa salphaa ji’a sadii gad hin taane, yookiin dubbichi ulfaataa yommuu ta’utti hidhaa cimaa waggaa torbaa hincaalle kan ta’u:
(a) miliquun kan raawwatame, kan yaalame; yookiin kan mijaa’e hojii gamtaa gareen, meeshaa waraanaan yookiin meeshaa biroo kamiiniyyuu yoo ta’e; yookiin
(b) namni akka miliquuf gargaarsi taasifameef siviilii yookiin miseensa raayyaa ittisaa yoo ta’ellee yoo xiqqaate yakkamaa hidhaa cimaan waggaa digdamaa itti murtaa’e yoo ta’edha.
3. Yakkamtichi karoora isaa milkeessuuf jeequmsa kaase, gocha humna nama yookiin qabeenya irratti raawatee, yookiin hojjetaa yookiin eegduu faayiidaan sossobee, yookiin yakka dachaabiroo kamiiniiyyuu raawwatee yoo ta’e, yakkoonni dachaa yommuu raawwatamanitti tumaaleen adabbii cimsuu ilaalchisee tumaman raawwatamoo ni ta’u/Keewwata 62 fi 66/.
Keewwata 463. Miliquu Booji’amtoota Waraanaafi Too’atamtoota Loltummaa fi Akka Miliqan Gargaaruu
Tumaan Keewwata 426 akka eegametti ta’ee, bakka yookiin idoo loltootni itti too’ataman addatti qophaa’e keessatti booji’amtoota waraanaa yookiin too’atama loltootaa argaman ilaalchisee adabbii yakkaa itti murtaa’een kan qabaman yoo ta’uu baataniillee tumaaleen armaan olitti keewwata 461 fi 462 jalatti ibsaman haala wal fakkaatuun raawwatamoo ni ta’u.
Keewwata 464. Fincila Hidhamtoota
1. Namni kamiyyuu akka seeraatti qabamee akka turu yommuu taasifametti:
(a) abbaa aangoo bulchiinsa mana hidhaa, eegduu yookiin bulchiinsa mana hidhaa yookiin nama too’annoo gaggeessuuf itti gaafatamummaan kennameef kamiyyuu gocha humnaatiin yookiin dhaadannaan dirqama hojii isaa akka hinraawwannee yookiin gocha faallaa dirqama hojii isaa ta’e akka raawwatu dirqisiisuuf;
(b) namootuma kana keessaa kan dirqama hojii isaa raawwachaa jiru tokko irraa balaa geessisuuf; yookiin
(c) namoota yookiin qabeenya irratti gocha humna raawwachuun miliquuf yaaduun fincila yookiin jeequmsa keessatti kan hirmaate yoo ta’e;
Adabbii itti murtaa’uu qabu yookiin itti murtaa’ee inni raawwataa jiru waliin dabalataa kan ta’u hidhaa salphaa ji’a sadii irraa hanga waggaa shanii gahuun ni adabama.
2. Namni fincila qopheesse yookiin hooggane:
(a) gochi humnaa yookiin dirqisiisuu yoo hin raawwatamin hidhaa cimaa waggaa shan hin caalleen;
(b) gochi humnaa yookiin dirqisiisuun kan raawwatamee yoo ta’e; tumaaleen adabbii kana caalu hordofsiisan akkuma eegamanitti ta’ee, hidhaa cimaa waggaa kudhan hin caalleen ni adabama.
3. Namoota Yookiin qabeenya irra miidhaan kan ga’e yoo ta’e tumaaleen waliigalaa adabbii yakkoota dacha cimsuu ilaalchisee tumaman raawwatamoo ni ta’u/Keewwata 63,66/.
Keewwata 465. Dhorkaa Naannawaa Tokkoo Cabsuu
Namni kamiyyuu iddoo yookiin naanna’aa tokkotti daangeeffamee akka jiraatu yookiin iddoo murtaa’e tokko jiraachuu yookiin oolee buluu kan dhorku yookiin biyyaa akka ba’u murtiin itti murtaa’ee osoo jiruu sababa humanaa ol ta’e osoo hin qabaatin murtii kana kan cabse yoo ta’e;
Barbaachisaa yoo ta’u tarkaanfii eeggannoo itti murtaa’ee inni cabse ol kaasuu danda’uun akkuma eegametti ta’ee, hidhaa salphaa waggaa tokko hin caalleen ni adabama.
Yeroon murtiin adabbbichaa itti turu tarkaanfilee eeggannoo bilisummaa dhuunfaa hir’isan waliin hin heerregamu.
Yakkota Filannooleefi Kenniinsa Sagalee Ummataarratti Raawwatamanu
Keewwata 466. Walga’ii Flannoof Taasifamuu fi Adeemsa Filannoo Jeequu fi Gufachiisuu
1. Namni Kamiyyuu Walga’ii ummataa filannoo wajjin wal qabate kan seeraan hayyamame yookiin kenniinsaa sagalee yookiin filannoo too’annoo abbootii aangoo dhimmichi ilaallatuun seeraan taasifamu karaa seera-qabeessa hin taane kamiiniyyuu kan jeeqe, kan dhorke, kan gufachiise yookiin akka addaan citu kan taasise yoo ta’e;
Hidhaa salphaa waggaa tokko hincaaleefi adabbii maallaqaa qarshii kuma tokko hincaalleen ni adabama.
2. Namoota yookiin qabeenyarratti gochi humnaa kan raawwatame yoo ta’e; yookiin dhaadannaan amala lolaa yookiin jeequmsaa qabu kan ka’e yoo ta’e; tumaaleen rogummaa qabanu dabalataan raawwatamoo ni ta’u.
Keewwata 467. Mirga Sagalee Filannoo Kennuu yookiin Filatamuu Tuquu
1. Namni kamiyyuu dhaadannoon, dirqisiisuun, aangoo isaatti seeraan ala fayyadamuun yookiin gocha humnaatiin, waliin dha’uun keessumattu maqaa jijjiiruun, beeksisa yookiin waamicha dhoksuun yookiin hambisuun yookiin tooftaa biroo kamiiniyyuu:
(a) Namni biroo mirga filuu yookiin filatamuu isaatti akka hin fayyadamne kan dhorke yoo ta’e; yookiin
(b) Tooftaa kana fakkaatuun namni biroo mirga isaatti karaa murta’aa ta’e tokkoon akka itti fayyadamu yookiin mirgumaa isaa kanatti osoo hinfayyadamin hafuuf dirqama akka seenu kan taasie yookiin kan sossobe yoo ta’e; hidhaa salphaa waggaa tokko hincaalleen yookiin adabbii maallaqaatiin ni adabama.
2. Namni kamiyyuu akka fedhii isaatti fayyadamuuf bu’uura mirga kennameefiitiin mirga filachuu isaa karaa murtaa’e tokkoon nama itti fayyadame yookiin osoo itti hin fayyadamin dhiise irratti miidhaa kan geesise yoo ta’e;
Adabbii armaan olitti ibsameen ni adabama.
Keewwata 468.Fayyidaa Sossobuu Filannoo Irratti Kennamu
1. Namni kamiyyuu nama biroo mirga filachuu yookiin filatamuu qabu mirga isaatti karaa murtaa’een akka fayyadamu yookiin mirga isaa akka dhiisu taasisuuf karaa kallattii yookiin alkallattiidhaan mallaqa, yookiin faayidaa akaakuubiroo kamiyyuu kan kenne, yookiin kennuuf waadaa kan gale yoo ta’e;
Hidhaa cimaa waggaa shan hincaallee fi adabbii maallaqaatiin ni adabama.
2. Namni mirga filachuu yookiin filatamuu qabu kamiyyuu mirga isaa kanatti akka fayyadamu, yookiin karaa murtaa’e tokkoon akka itti fayyadamu yookiin osoo itti hinfayyadamin akka hafu maallaqa yookiin faayidaa akaakuubiroo kamiyyuu kan fudhate yookiin fudhachuuf kan waliigale yoo ta’e; adabbii armaan olitti ibsameen ni adabama.
Keewwata 469. Hojmaata Hinmale
1. Filatamaa kaadhimamaan kamiyyuu seeraan kan hayyamameen ala maallaqa duula filannoof ta’u nama, garee yookiin jaarmiyaa kamiyyuu irraa kara kallattiinis ta’ee al kallattiin kan walitti qabe yookiin kan fuudhe yoo ta’e; yookiin dambiiilee heerregaa dorgommii filannoo murtaaa’an kan hin kabajne yoo ta’e, yookiin herreega dorgommii filannoo keessatti baasii isaa itti yaadee xiqqeessee kan agarsiise yoo ta’e;
Hidhaa salphaa waggaa tokko hin caalleen yookiin adabbii maallaqaatiin ni adabama.
2. Namni kamiyyuu filatamticha kaadhimamaa irraa hayyama osoo hinargatin baasii filannoo filatamaa kaadhimamaa tokko uwwisuuf maallaqa kan walitti qabe, kan kenne, yookiin karaa kamiiniyyuu gumaacha kan taasise yoo ta’e; Adabbiin armaan olitti ibsame irratti ni raawwatama.
3. Namni kamiyyuu kallattiin yookiin karaa nama birootiin:
(a) Namaan himsiisuun, walii barreessuun, paamfileetiin/barreeffamoota xixiqqoon/, barreeffama maxxanfamuun yookiin fakkiidhaan, barreeffama maxxanfamee bahuun, radiyoon, mala sabquunnamtii biroo kamiiniyyuu tamsasuun oduu yookiin haasaa sobaatti gargaaramuun; yookiin
(b) Karaa biroo waliindha’uu, dabsuu yookiin hojmaata haqaqabeessa ta’een ala ta’e kamiiniyyuu gargaaramuudhaan, waliindha’ee sagalee filataa kan argate yookiin sagalee filataatiin garmalee kan fayyadame yookiin sagaleen isaa nama filatichi filateef akka hin tajaajille kan taasise yoo ta’e;
Hidhaa salphaa waggaa tokko hincaalleen yookiin adabbii maallaqaa qarshii kuma shan hin caalleen ni adabama.
Keewwata 470. Waliindha’uuGalmeessuurratti Raawwatamu
(a) Tarreeffama filannoo yookiin galmee filannoo keessatti maqaa yookiin gonfa sobaan yookiin dandeetti hinqabneen akka galmaa’u kan taasise yookiin dhabiinsa dandeetti seeraan beekame qabachuu isaa osoo hin ibsin kan galmaa’e yoo ta’e;
(b) Yeroo tokkotti tarreeffama yookiin galmeewwan filannoo lama yookiin lamaa ol ta’an keessatti maqaa isaa kan galmeessise yookiin seeraan ala waraqaalee sagaleen ittin kennamu yookiin kan filannoo kan fudhe yookiin akka kennamaniif kan taasise yoo ta’e; Yookiin
(c) Seeraan ala namoota lubbuun jiran, kan du’an, kan badan, yookiin kan lubbuun jiraatanii hin beekne kan galmeessise yookiin maqaa isaaniitiin waraqaa sagaleen ittiin kennamu kan fudhate yoo ta’e;
Hidhaa salphaa waggaa tokko hin caalleen yookiin adabbii maallaqaa qarshii kuma tokko hin caalleen ni adabama.
2. Yakki keewwata kana keewwata xiqqaa (1) jalatti ibsame filatamaa kaadhimamaa dhaan yommuu raawwatamu adabbichi hidhaa cimaa waggaa lama hincaallee yookiin adabbii maallaqaa qarshii kuma kudhan hin caalee ni ta’a.
Keewwata 471. Gocha waliin Dha’uu Yeroo Kenniinsa Sagalee Raawwatamu
Nani kamiyyuu filannoon beekamaa ta’e akaakuu kamiyyuu yommuu geggeeffamu; filannichaan dura, yeroo filannichaa, yookiin filannichaan booda gocha raawwatamu akaakuu kamiiniyyuu keessumattuu:
(a) Galmee filannoo, tarreeffama filannoo xumurame, yookiin sagaleen kan ittiin kenname waraqaa sagaleen ittiin kennamu fakkeessee hojjechuudhaan, Kan sobaa taasisuudhaan, jijjiiruudhaan, tooftaa nama dogoggorsuun irra isaatti maxxansuudhaan, yookiin hambisuudhaan, balleessuudhaan yookiin fudhachuudhaan;
(b) Yeroo filannoo tokkotti yeroo tokko ol sagalee kennuudhaan;
(c) Waraqaa sagaleen ittiin kennamu sanduuqa filannoo keessa buusuudhaan yookiin sandduuqa filannoo keessaa baasee fudhachuun, yookiin karaa kamiiniyyuu nama seeraan ala iddoon jireenyaa seera qabeessi isaa naannoo filannoon itti gaggeeffamuun ala ta’e, dandeettii kan hin qabne, dandeetti kan dhabe, sagalee akka kennu, yookiin maqaa nama du’ee yookiin jireenya qabaatee hin beekneetiin sagalee akka kennu taasisuudhaan yookiin waraqaa sagaleen ittiin kennamu kan sagalee kennuuf akka hin tajaajille taasifame, kan gara sobbaatti jijjirame, yookiin sobaan kan hojjetame osoo beekuu sanduuqa filannoo keessa galchuudhaan; yookiin akka galu hayyamuudhaan; yookiin
(d) Waraqaa sagaleen ittiin kennamu sirritti lakka’uu dhabuudhaan yookiin itti yaadee sagalee kenname, waraqaa sagaleen ittiin kenname, maqaa yookiin mallatoo dhiisuudhaan, yookiin mallattoo yookiin maqaa barraa’een ala dubbiisuudhaan, yookiin qaboo yaa’ii adeemsa filannichaa yookiin bu’aa filannoo ofiiseelaawaa irratti waan dhugaan alaa galmeessuudhaan; yookiin
(e) Bu’aa yookiin sanadafilannoo hambiisuudhaan, dhoksuudhaan, jijjiiruudhaan yookiin balleessuudhaan yookiin namoota isaan kana fudhachuuf aangoo hin qabnetti seeraan ala kennuudhaan;
Bu’aa filannoo sirrii ta’e kan dogoggorse yoo ta’e; hidhaa salphaan yookiin adabbii maallaqaatiin ni adabama.
Keewwata 472. Wal Irra Bu’uu Yakkoota
Yakki waliindha’uu yookiin gara sobaatti jijjiiruu kan raawwatame mala qabatamaan yookiin qabatamaa hintaaneen dhoksaan yoo ta’e; tumaan adabbiin ittin murtaa’u dhimmuma kana kan ilaallatu dabalataan raawwatamaa ni ta’a./Keewwata 375,376/.
Keewwata 473. Eegumsa Iccitii Kenniinsa Sagalee Cabsuu Namni Kamiyyuu:
(a) Filataan tokko mirga qabu haala kamiin akka itti tajaajilame yookiin sagalee isaa akka kenne karaa seeraa ala ta’een beekuu kan danda’e yoo ta’e; yookiin
(b) Dhimma akaakuu akkanaa akka carraa erga beekee booda jechaanis ta’ee gaazeexaadhaan yookiin tooftaa akaakuubirootiin itti yaadee ummataaf kan ibse yookiin odicha kan tamsaase yoo ta’e; Hidhaa salphaan yookiin adabbii maallaqaatiin ni adabama.
Keewwata 474. Waraqaalee Sagaleen Ittiin kennamuu fi Sanduuqota Filannoo Fudhachuufi Balleessuu:
1. Namni Kamiyyuu sanduuqa filannoo waraqaaleen sagalee ittiin kennamee hin lakkaa’amne qabatee jiru, Yookiin waraqaalee sagaleen ittiin kennamu kan sanduuqicha keessa jiran hunda yookiin gar tokkee isaa iddoodhaa kan kaase, akka miliqan kan taasise yookiin kan balleesse yoo ta’e; Hidhaa salphaan yookiin adabbii maallaqaatiin ni adabama.
2. Yakkichi kan raawwatame namoota tokko ol ta’aniin yookiin gocha humnaan yoo ta’e hoogantootaaf yookiin geggeesitootaaf waa’ee adabbii cimsuu kan tumamee akkuma eegametti ta’ee/Keewwata 84(d)/ adabbichi hidhaa cimaa waggaa kudhan hin caalle ni ta’a.
3. Gochi dirqisiisuu buufata filannoo yookiin miseensota buufata filannoo irratti raawwatamuu bu’uura tumaalee seera kanaa keewwata 440 irraa hanga 442 tti ibsamaniin ni adabsiisa.
Keewwata 475. Adabbiilee Dabalataa
Yakki filannoo ilaalchisee raawwatame adabbii hidhaa kan murteessise yoo ta’e; manni murtichaa adabbii mirga hawaasummaa irraa yeroo murtaa’eef dhorkamuu yeroo kamiyyuu dabalataan murteessuu qaba /Keewwata 123(a)/.
Keewwata 476. Sababoota Adabbii Cimsan
Yakkoota mata duree kana keessatti ibsaman keessaa tokko kan raawwate hojjetaa mootummaa yookiin bakka filannoo yookiin buufata sagaleen itti kennamutti nama miseensummaa ooffiiseelaan yookiin too’attummaan hojjetu yoo ta’e;gochiichi aangoon seera ala fayyadamuun /Keewwata 407/ yookiin iccitii mootummaa ibsuun /Keewwata 397/, yookiin yakka kana fakkaatuun kan adabsiisu yoo ta’e malee adabbichi baayyee yoo xiqqaate hidhaa salphaa ji’a tokko ta’ee fiixeen adabbichaa adabbii yakkichaaf tumame irratti walakkaa isaa dabaluun bu’aa argamuudha.
Haallawwan isaa baayyee cimaa yommuu ta’an yookiin yakkichi daddabalamee yommuu raawwatamu manni murtichaa adabbicha hidhaa waliin adabbii maallaqaa dabalataan murteessuu ni danda’a.
Mata duree Jaha.
Yakkota Nageenya Ummataa, Nagaafi Tasgabbaa’anii Jirachuu Irratti Raawwataman
Yakkoota Nageenya Ummataa Irratti Raawwataman
Yakkoota Yakkoonni Biroon Akka Raawataman Kakaasan Yookiin Kakaasuu Danda’an
Keewwata 477. HojihiiktummaaBalaafamaa Ta’e
1. Namni kamiyyuu qaama guutuu osoo qabuu bakka jireenyaa murtaa’e yookiin hojii idilee yookiin madda galii idilee yookiin beekama jireenya isaatiif barbaachisaa ta’e kan hinqabne ta’ee, amala hojihiiktummaa yookiin haala jireenya badaan maallaqa argachuuf jedhee mala badaa balaaleffatamaa ta’e yaadee amaleeffatee kan qabateefi jireenyuma isaa kanaan nageenyaafi tasgabbii ummataaf balaafamaa kan ta’e yoo ta’e;
Hojii dirqamaa bilisummaa dhuunfaa hir’isuu waliin kan murtaa’u/Keewwata 104/, yookiin hidhaa salphaa ji’a jaha hincaalleen ni adabama.
2. Balleessichi meeshaa waraanaa yookiin meeshaalee uumama isaaniin yakka raawwachuuf tajaajilan qabatee kan argame yoo ta’e; hidhaa salphaan kan adabamu yoo ta’u, gocha dhaadannaa yookiin dirqisiisuu, yookiin namoota dhuunfaa irratti gocha humna yookiin harka darbuu kan raawwate yoo ta’e; tumaan yakkoota dachaa ilaalchisee tumame raawwatamaa ni ta’a.
3. Haalawwan yommuu madaalaman barbaachisaa ta’anii yeroo argamanitti manni murtichaa tarkaanfilee eeggannoo bilisummaa hir’isan /Keewwata 144,149/ adabbii isa muummee irratti dabalee murteessuu ni danda’a.
Keewwata 478. Miseensa Raawwattoota Gocha Hamaa Ta’uu
1. Namni kamiyyuu namoota tokko yookiin tokko ol ta’an waliin ta’uun nageenya yookiin fayyaa ummataa irratti yookiin nama irratti yookiin qabeenya irratti yakka cimaa raawachuuf yookiin yakkuma kana qopheessuuf kan sade yookiin namni biroo sadoo kana keessatti akka hirmaatu kan kakaase yoo ta’eefi sadichi gochaan kan ibsame yoo ta’e;
Hidhaa salphaa ji’a jaha gadi hin taaneefi adabbii maallaqaan ni adabama.
Kaayyoo tumaa kanaaf ”yakaka cimaa” jechuun yoo xiqqaate yakka hidhaa cimaa waggaa shaniin adabsiisuudha.
2. Yakkamtoonni sun baayyee kan ta’an yoo ta’e yookiin meeshaalee waraanaa yookiin meeshaalee biroo yakka raawwachuuf tajaajilan hidhatanii yookiin qabatani kan argaman yoo ta’e; adabbichi hidhaa salphaa waggaa tokkoo gadi hintaaneefi adabbii maallaqaa ni ta’a.
3. Yakka cimaa biroo lubbuu yookiin qaama namaa, nageenya ummataa yookiin qabeenyaa irratti raawwatame, yakkoota cimaa akaakuu tokko yookiin addaddaa ta’an kan walitti aananii raawwataman, yookiin yakkoota cimoo meeshaa waraanaan, baalota sammuu adoochaniin yookiin daldala namaa kan fakkaataniin balaafamuummaan adda yakkichaa kan ibsame yoo ta’e; manni murtichaa tumaalee yakkoota dachaa bu’uureeffachuun adabbii olaanaa seeraan tumame ni murteessa /Keewwata. 63, fi 66/.
Keewwata 479. Da’oofi Gargaaraa Rawwattoota Gocha Hamaa Ta’uu
1. Namni Kamiyyuu bu’uura haalawwan seera kanaan waa’ee miiltummaa(keewwata 37) tumamaniin adabsiisaniin ala:
(a) hawaasa irratti, namoota dhuunfaa yookiin qabeenya irratti yakka raawwachuuf miseensota gareewwan yookiin waldaalee gocha hamaatiin osoo hindirqamin osoo beekuu da’oo yookiin nyaatakan kenne, yookiin karaa biroo kamiiniyyuu kan gargaare, yookiin iddoo jireenyaa yookiin walga’ii kan kenne yoo ta’e;
Hidhaa salphaa ji’a jaha gadi hintaaneefi adabbii maallaqaan ni adabama.
(b) dhaaddannaan yookiin haala kamiiniyyuu osoo hindirqamin jiraachuu, karoora, iddoo itti argaman, yookiin idoo itti walgahii gareewwan yookiin waldaalee kanaa osoo beekuu abbaa aangoo dhimmichi ilaallatutti osoo hinbeeksisin kan hafe yoo ta’e; hidhaa salphaafi adabbii maallaqaan ni adabama.
2. Garichi yookiin waldichi baayyee balaafamaa yoo ta’e yookiin dawoo kennuun yookiin gargaaruun kan raawwatame amaleeffannaan yoo ta’e; adabbichi hidhaa salphaa waggaa tokko gadi hin taane ni ta’a.
3. Namni kamiyyuu haalawwan bu’uura tumaalee seeraa kanaan waa’eemiiltummaa/Keewwata 37/tumamaniin adabsiisaniin ala maallaqichi yookiin qabeenyi biroon:
(a) yakka keewwata 262(1) yookiin (2), 481(2) yookiin (3), 499(2), yookiin 585 (3) jalatti tumaman raawwachuuf; yookiin
(b) meeshaalee waraanaa fayyadamuun walitti bu’iinsa taasifamuu keessatti nama hirmaanaa hin qabne yookiin siviilota ajjeesuuf yookiin qaama isaarra miidhaa geesisuuf yookiin qabeenya irratti miidhaa cimaa geesisuuf yookiin mootummaan yookiin jaarmiyaan addunyaalessaa gocha tokko akka raawwatu yookiin raawwachuu irraa akka ofqusatu dirqisiisuuf yookiin ummata dorsisuuf karoora qabame raawwachuuf;
Guutummaan yookiin gar-tokkeen akka oolu osoo beekuu, karaa kamiiniyyuu kallattiinis ta’e alkallattiin maallaqa yookiin qabeenya akaakuubirookamiiniyyuu kan walitti qabe, gocha raawwattootaaf kan kenne, yookiin kan dhiheesse yoo ta’e;
Qabeenyichi hojiirra oolus, ooluu baatus hidhaa cimaa waggaa shanii hanga waggaa kudhanii gahuun ni adabama.
4. Namni kamiyyuu seera kanaan waa’ee miiltummaa bu’uura tumameen /keewwata 37/ haalawwan adabsiisaniin ala gareen tokko yakka keewwata 262(1) (2), 481 (2)(3) , 499 (2), 585(3) yookiin keewwata kana keewwata xiqqaa (3) jalatti ibsameen yakka akka raawwatu yookiin kaayyoon seeraan alaa garichaa hojiirraa akka ooluuf gummacha kamiyyuu kan taasise, yookiin yakka ibsame irratti bobbaasuuf nama kan file, yookiin deeggerssi isaa yakkoota ibsaman keessaa tokko raawwachuuf akka tajaajilu osoo beekuu raawwataa gochichaaf sanada deemsaa yookiin waraqaa eenyummaa sobaa kan qopheesse yookiin meeshaa waraanaa dabalatee deggersa kamiiyyuu kan taasise yookiin tajaajila kan kenne yoo ta’e; adabbii keewwata kana keewwata xiqqaa (3) jalatti ibsameen ni adabama.
Keewwata 480. Yakki Akka Raawwatamu Ifatti kakaasuu yookiin Yakkaan Ni Tole Jechuu
Namni kamiyyuu jechaan, barreeffamaan, fakkiin, sochii qaamaan yookiin gocha biroon ifatti:
(a) hawaasarratti, nama dhuunfaa yookiin qabeenya irratti gocha humna yookiin yakka cimaaakka raawwatu nama biroo kan kakaase yoo ta’e;
(b) yakka akaakuu akkanaa yookiin raawwaticha kan faarse yookiin ni tole kan jedhe yoo ta’e; yookiin
(c) kaayyoo isaa nama adabame waliin tokko taasisuun, gocha balleeessichaa deggeruun yookiin abbootii aangoo balaaleffachuun adabbii maallaqaa akka kaffalu seeraan nama itti murtaa’eef kaffaltii adabichaaf kan ta’u buusii maallaqaa kan gaafate yookiin kan walitti qabe yoota’e; Hidhaa salphaan yookiin adabbii maallaqan ni adabama.
Keewwata 481. Meeshaa Waraanaa Daldaluu
1. Namni kamiyyuu mootummaa balaa irraa buusuu ilaalchisee tumaalee tumamaniin alatti/Keewwata 256/:
(a) hayyama osoo hin qabaatiin yookiin karaa faallaa seeraa ta’een meeshaalee waraanaa, wantoota dhohan, yookiin rasaasota akaakuu kamiyyuu kaayyoo daldaluutiin kan hojjete, biyyaa alaa irraa kan fichisiise, gara biyya alaatti kan erge, kan geejiibe, kan bite, kan fudhate, kan kaa’e, kan kuuse, kan dhokse, gurgurtaaf kan dhiheesse yookiin akka naanna’an kan taasise yookiin kan raabse yoo ta’e; yookiin
(b) kaayyoo daldalaaf osoo hin ta’iin namoota shakkaman yookiin balaafamoo ta’aniif osoo beekuu meshaa waraanaa akaakuu kamiyyuu kan gurgure, kan dabarsee kenne, yookiin kan kenne yoo ta’e;
Mi’oonni jedhaman kun dhaalamuun isaanii osoo hin hafin adabbii maallaqaafi hidhaa cimaa waggaa shan hin caalleen, yookiin haalli isaa ulfaataa yommuu ta’etti hidhaa cimaa waggaa kudhan hin caalleen ni adabama.
2. Yakkichi kan raawwatame lubbuu namaa, qaama, qabeenya, qabeenya uumamaa, naannoo irratti balaa kan hordofsiisu yookiin hordofsiisuu kan danda’u waahiyyoo niwukilaraa qabiiyyee isaa jala gochuun, fudhaachuun, gara wanta birootti jijjiiruun, naannessuun, raabsuun, yookiin maqsuun, hatuun yookiin waahiyicha waliin dhahee harka offiitti galfachuun yookiin akka harka isaa gahu gocha humnaa, dhaadannaa yookiin kan biroo kamiyyuu raawwachuun yookiin gochoota kana raawwachuuf dhadannaan kan raawwatame yoo ta’e;
Hidhaa cimaa waggaa shanii hanga waggaa kudhanii gahuun ni adabsiisa.
3. Gochichi kan raawwatame, meeshaa waraanaa yommuu hojjetu adda bahee akka beekamu sirna moggaasaa barbaachisu yookiin mootummaan dhimmi ilaallatu osoo hin hayyamin, balleessichi biyya meeshichi wraanaa yookiin rasaasichi itti hojjetame yookiin warshaalame irraa abbaa aangoo dhimmi ilaallatu irraa hayyama osoo hin argatiin yookiin bu’uura seeraan meeshicha irratti maallattoon addummaa osoo hin taasifamin meeshaalee jijjirraa fi qaamolee addaddaa meeshaa daldala meeshaa seeraan alaatiin argamaniin fayyadamee meeshaa waraanaa yommuu hojjete yookiin warshaale;
Adabbichi hidhaa cimaa waggaa shanii hanga waggaa kudha lamaa gahu ni ta’a.
4. Balleessichi gochoowwan ibsaman kan raawwate jaalala maallaqaan yookiin hojii ogummaa isaa taasisuun yoo ta’e; adabbichi hidhaa cimaa waggaa shanii hanga waggaa kudha shanii gahuu danda’u ni ta’a.
5. Seeronni waa’ee hojimaata, qabannaafi itti fayyadama meeshaaf bahan kan darbiinsa dambiitiin adabsiisan akkuma eegamanitti ta’u /Keewwata 808 fi 809/.
Yakkoota Jeequmsa Ummataa kakaasan yookiin Kakaasuu Danda’an
Keewwata 482. Waldaaleefi Walgahiiwwan Dhorkaman
(a) waldaa, garee, walgahii yookiin yaa’ii seeraan, mootummaan yookiin abbaa aangoo dhimmi ilaallatuun waliigalatti yookiin yeroo murtaa’eef dhorkame keessatti osoo beekuu kan hirmaate yoo ta’e; yookiin
(b) osoo beeekuu waldaa, garee, walgahii yookiin yaa’ii akkanaatiif manneen, iddoowwan yookiin mooraa maallaqaan yookiin tolaan akka itti tajaajilamu kan taasise yoo ta’e; Adabbii maallaqaa qarshii kuma tokko hin caalleen ni adabama.
2. Hogganaan, gurmeessaan yookiin ajajaan yakkichaa kan adabamu hidhaa salphaa waggaa tokko hin caalleen ta’a.
Keewwata 483. Waldaalee Dhoksaa yookiin Gareewwan Meeshaa Hidhatan
Hojjiin yookiin walgahiin isaanii dhoksaa kan ta’e waldaalee seeraan alaa, yookiin gareewwan yookiin waldaalee seeraa ala ta’aniifi meeshaa hidhatan, keessumattuu leenjii loltummaaf yookiin dhukaasa didhoofyookiin ispoortiif akka hundaa’anfakkeessuun gareewwan yookiin waldaaleen beekaman yakka keewwata 479 jalatti ibsame yommuu raawwatannamnihirmaataa ta’e; hidhaa salphaafi adabbii maallaqaan ni adabama.
Gaggeessaa, gurmeessaa yookiin miseensa beekamaa waldaa yookiin garee kanaa irratti adabbiin murtaa’u hidhaa salphaa ji’a jaha gadi hin taaneefi adabbii maallaqaa qarshii kuma tokko gadi hin taane ta’a.
Keewwata 484. WalgahiiwwanDhorkaman
1. Namni kamiyyuu daandii ummataa yookiin iddoo walgahii ummataa irratti walgahii seeraan dhorkame kamiyyuu irratti fedhaa isaan kan hirmaate yoo ta’e; Adabbii maallaqaa qarshii kuma lama hin caalleen ni adabama.
2. Gaggeessaan, qopheessaan yookiin ajajaan yakkichaa kan adabamu hidhaa salphaa waggaa lama hin caalleen ta’a.
3. Walgahii seeraan alaa namoota meeshaa qabataniin taasifame irratti yaadee namni hirmaate kamiyyuu hidhaa salphaa hanga waggaa shanii gahuu danda’uun ni adabama.
4. Haala armaan olitti keewwata xiqqaa (3) jalatti ibsameen yakkichi yommuu raawwatamu, gaggeessaa, qopheessaa yookiin ajajaa yakkichaa kan ta’e yookiin namni meeshaa qabate; hidhaa salphaa waggaa tokkoo hanga waggaa shan gahuu danda’uun ni adabama.
5. Jaarmiyaan namummaan seeraa kennameef walgahii seeraan dhorkame kan gurmeesse yookiin kan gaggeesse yoo ta’e; adabbii maallaqaa qarshii kuma kudhan hin caalleen ni adabama. Keewwata 485. Ooduun Ummata Shororkeessuu
(a) nageenya ummataa yookiin lubbuu, fayyaa yookiin qabeenya namoota dhunfaaf balaa yaaddeessaa ta’e keessumattuu balaa weeraraa, ajjeechaa namaa, gubiinsa abiddaa, badiisa yookiin saamicha akka gahu soodaachisuun; yookiin
(b) waa’ee haalawwan kanaa yookiin walumagalatti waa’ee jeequmsa gahuu yookiin waa’ee badiisa dhiheenyatti gahuu yookiin wa’ee balaa uumamaa oduu sobaa facaasuun; itti yaadee ummata kan shororkeesseyoo tahe;
Hidhaa salphaa waggaa sadii hin caalleen yookiin adabbii maallaqaan ni adabama.
2. Adabbii olaanaa kan murteessisan tumaaleen rogummaa qaban akkuma eegamanitti ta’ee, haalawwan jeequmsa fi unkuramni hamaa baay’ee ulfaataa ta’e fiduu danda’an yookiin kan fidan yoo ta’e; adabbichi hidha cimaa waggaa sadii hin caallee ni ta’a.
Keewwata 486. Oduu Sobaa Odeessuun Ummata Kakaasuu
Namni kamiyyuu haala yakkoota nageenya biyyaa irratti raawwatameen ala ta’een/Keewwata 240,257 (e), fi 261(1)/:
(a) namni mootummaa, abbootii aangoo ummataa yookiin hojii isaanii irratti oduu sobaa, shakkii, yookiin hamii sobaa kan uumuu yookiin facaasu kanarraa kan ka’eenis yaada ummataa kan jeeqe, kakaase, yookiin jeequuf kan danda’u yoo ta’e; yookiin
(b) sobaan yakkuuyookiin tooftaa birooakaakuu kaminiyyuu shakkii kan baballise, jibiinsa kan kakaase yookiin jeequmsa gocha humnaa yookiin kan siyaasaa, kan sanyii yookiin kan amantii kan kakaase yoo ta’e;
Hedhaa salphaan yookiin adabbii maallaqaan, yookiin yakkicha ulfaataayommuu ta’etti hidhaa cimaa waggaa sadii hin caalleen ni adabama. Keewwata 487. Ibsoota Yaadaa Amala Kakaasuu Qaban Namni kamiyyuu:
(a) iddoo ummanni walitti qabamu yookiin walgahii kam irrattiyyuu gocha seeraan ala ta’eef kan kakaasu yookiin ibsa haasaa amala dhaadannaa qabu yookiin fakkii kan qopheesse, kan baballise, kan tamsaase, yookiin dhageessisee yoo ta’e; Yookiin
(b) abbaa aangoo rogummaa qabuun ajajawwan seeraan kennaman yookiin seerotaafi dambiilee bahan ummanni akka mormu taasisuuf ifatti kan kakaase yoo tahe;
Keewwata 488. Jeequmsa
1. Namni kamiyyuu walgahii seeraan alaa nama yookiin qabeenya irratti; gocha humnaa gamtaan raawwatame irratti fedha isaan kan hirmaate yoo tahe;
Hidhaa salphaa ji’a tokkoo gadii hin taaneen yookiin adabbii maallaqaan ni adabama.
2. Gurmeessaan, kakaasaan yookiin gaggeessaan yakkichaa hidhaa salphaa ji’a jahaa gadi hin taaneefi adabbii maallaqaan, yakkichi ulfaataa yeroo ta’etti hidhaa cimaa waggaa shan hin caalleefi adabbii maallaqaan ni adabama.
3. Nama yookiin qabeenya irratti gocha humnaa dhuunfaa isaatiin namni raawwate kam iyyuu; yakki inni raawwate tumaa seeraa addaan adabbii olaanaa kan adabsiisu yoo ta’e malee, hidhaa cimaa waggaa sadii hin caalleen ni adabama.
Keewwata 489. Dhimmoota Ilaalchi Addaa Isaaniif Taasifamu.
Gocha humnaa osoo hin raawwatiin yookiin akka raawwatamu osoo hin kakaasiin walgahii dhorkame, hiriira, ibsa yaadaa amala kakaasuu qabu, yaa’ii seeraan ala ta’e irraa yookiin dhaadannaa gamtaa irraa fedha isaaniin yookiin ajaja abbaa aangoon hirmaattonni bahanii adeeman barbaachisaa yommuu tahe ceepha’amanii, yookiin dheekkamamanii/Keewwata 122/adabbii biroo irraa bilisa akka ta’aniif murteessuun ni dandaa’ama.
Yakkoota Nageenya Ummataafi Tasgabbiin Jiraachuu Irratti Raawwataman
Keewwata 490. Walga’ii Yookiin Yaa’ii Jeequu
1. Namni kamiyyuu seeraan kan hayyamame walgahii yookiin yaa’ii kamiiniyyuu jechaan, doorsisuun, gocha humnaan, humnaan yookiin karaa birookamiiniyyuu seera mormuun kan weerare, kan jeeqe, kan dhorke yookiin kan bittinse yoo ta’e;
Hidhaa salphaa ji’a jaha hin caalleen yookiin adabbii maallaqaa qarshii kuma tokko hin caalleen ni adabama.
2. Yakkichi kan ilaallatu abbootii aangoo, boordii yookiin komishinii ofiseelaa (official) ta’e yookiin kan filannoo, gurgurtaa caalbaasii yookiin hojii ummataa seera qabeessa ta’e kamiiniyyuu raawwachuuf walgahii yookiin yaa’ii taasifame yoo ta’e; walgahichi yookiin yaa’ichi kan siyaasaa, bulchiinsaa, amala seera raawwachiistummaa yookiin abbaa seerummaa kan qabu yoo ta’ellee; adabbichi hidhaa salphaa ji’a sadii gadi hin taaneefi adabbii maallaqaa qarshii dhiibba shanii gadi hin taane ni ta’a.
3. Badichi kan raawwatame gareen yookiin meeshaa waraanaa yookiin meeshaa biroo qabachuun yoo ta’e’ adabbichi hidhaa cimaa waggaa torba hin caalle ni ta’a
Keewwata 491. BadiiOfiin Ittigaafatamummaa Ala Ta’uun Gocha Jeequmsaa Rawwatamu
Badii ofiin machaa’uun yookiin haala biroon namni guutummaan ittigaafatamummaan ala of galche yoo xiqqaate yakka hidha waggaa tokkoon adabsiisu kan raawwate yoo ta’e.
Akka ulfaatinaafi guddina yookiin xiqqeenya balleessaa gocha raawwatameetti adabbii maallaqaan yookiin hidhaa salphaa waggaa tokko hin caalleen ni adabama. Keewwata 492. Nageenyaafi Miira Amantii Tuquu
Namni kamiyyuu itti yaadee ifatti:
(a) sirna amantaa, adeemsa ayyaaneffannaa yookiin gochaa amantii hayyamame akka hin raawwatamne kan dhorke, kan jeeqe, yookiin kan itti qoose yoo ta’e;yookiin
(b) iddoo, fakkii yookiin mi’a sirna amantaaf tajaajilu kan xureesse yoo ta’e; adabbii maallaqaa qarshii kuma tokko hin caalleen yookiin hidhaa salphaa waggaa lama hin caalleen ni adabama.
Keewwata 493. Nageenyaafi Kabaja Namoota Du’anii Tuquu.
(a) gaggeessa reeffaa yookiin sirna awwaalaa kan jeeqe yookiin kan salphise yoo ta’e;
(b) iddoo namni du’e itti boqote kan sarbe, xureesse, siidaa yookiin mallattoo awwaalichaa kan diige yookiin kan xureesse yookiin reeffa awwaalames ta’ee kan hin awwaalamiin kan salphise yookiin qaama isa kukkute yoo ta’e;
(c) reeffa ifatti kan xureesse yookiin kan rukute yoo ta’e; yookiin
(d) reeffa yookiin kutaa yookiin hamba qaama reeffaa kamiin iyyuu kan fudhate, akka badu kan taasise yookiin kan bittinneesse yoo ta’e;
Mata Dure Torba
Yakkoota NageenyaUmmataa, Quunnamtiifi Geejjiba Irratti Raawwataman
Yakkoota Tasgabbiifi Naggeenya Ummataa Irratti Raawwataman
Keewwata 494. Gubiinsa Abiddaa Qaqqabsiisuu
1. Namni Kamiyyuu namoota yookiin qabeenyaa irratti balaa waliigalaa geessisuu yaadee gamoo yookiin hojii qabatamaa (mullatu) akaakuu kamiyyuu, miidhaan, oomishaalee qonnaa, bosona, mukeen yookiin mi’oota biroo kan isaa yookiin nama biroo kamiiniyyuu abidda kan itti qabsiise yoo ta’e;
Hidhaa cimaa waggaa kudhan hin caalleen ni adabama.
2. Yakkichi balaa olaanaa kan hordofsiise yookiin namoota yookiin qabeenya irra miidhaan gahe kan babal’ate yoo ta’e; keessumattuu kan miidhaman gamoowwanummataa, gamoowwan tajaajilaa ummataa, manneen jiraattonni keessa jiran yookiinjireenyaaf tajaajilan, mankuusaa nyaataa, wantoota boba’an yookiin mankuusaalee dhohaa, bosonoota, albuudota, boollota boba’a yookiin calaltoota boba’aa, dooniilee xiyyaarootaayookiinkeessumattuu balaaf mijaawaa kan ta’an mi’oota biroo kamiyyuu yommuu ta’an; adabbichi hidha cimaa waggaa kudhashan hin caallee ni ta’a.
Keewwata 495. Balaa Uummamaa Geessisuu
Namni Kam iyyuu namoota yookiin qabeenya irratti balaa geessisuufyaadee balaa lolaa yookiin bishaaniin nyaatamuu, foxoqiinsa lafaa, diigama yookiin kan kana fakkaatan biroo kamiyyuu akka qaqqabu kan taasise yoo ta’e;
Bu’uura armaan olitti keewwata 494 jalatti tumameen ni adabama.
Keewwata 496. Hojiilee Qabatamoo Yookiin Hojiilee Egumsaa Miidhuu
Namni Kam iyyuu namoota yookiin qabeenya irratti balaa geessisuuf yaadee gamoowwan elektirikii, yookiin bishaan ilaallatan yookiin humna uumamaa ittisuuf hojiilee hojjetaman keessumattuu ujumoo, bo’olee, kuusaalee, Ittisa bishaanii, gadhiisa bishaanii yookiin itisaalee dambalii bishaanii kan mancaase yookiin kan diige yoo ta’e;
Keewwata 497. Dhoosuu
Namni kamiyyuu namoota yookiin qabeenya irratti balaa qaqqabsiisuuf yaadee wantoota balaafamoo boba’aa, baaruda, dimaamitii yookiin kana kan fakkaatan birookamiiniyyuu akka dhohu kan taasise yoo ta’e; Bu’uura armaan olitti keewwata 494 jalatti tumameen ni adabama.
Keewwata 498. Yakkoota Dagannoon Raawwataman
Namni kamiyyuu armaan olitti keewwata 494 hanga 497 keessatti ibsaman keessaa tokko dagannoon kan raawwate yoo ta’e;
Akka cimina yakkichaatti hidhaa salphaan yookiin adabbii maallaqaan ni adabama.
Balleessichi namoota yookiin qabeenya balaa ulfaataa ta’eef saaxilee kan argame yoo ta’e; manni murtichaa hidhaa salphaa murteessuu qaba.
Keewwata 499. Wantoota Dhohaniin, Boba’aniin Yookiin Summeessaniin Balaa Qaqqabsisuu
1. Namni Kamiyyuu nageenya ummataa irratti balaa qaqqabsiisuuf karoorfachuun wantoota dhohaniin, yookiin salphaatti boba’aniin yookiin gaazota summeessaniin osoo beekuu lubbuu, fayyaa yookiin qaama namaa yookiin qabeenya nama biroo balaaf kan saaxile yoo ta’e; Hidhaa cimaa waggaa kudhan hin caalleen ni adabama.
Balleessichi balaaf kan saaxile qabeenya qofa yoo ta’eefi miidhaan inni qaqqabsiise salphaa yoo ta’e adabbichi hidhaa salphaa ji’a jahaa gadi hin taane ni ta’a.
2. Yakkichi hidhaa cimaa waggaa shanii hanga waggaa kudhashanii gahuun kan adabsiisu; gochichi lubbuu yookiin qaama namaa irratti miidhaa qaqqabsiisuuf yookiin dinagdee irratti miidhaa cimaakan qaqqabsiisu yookiin qaqqabsiisuu danda’uun gochaa ifatti, iddoo taajaajila ummataatti, dhaabbata mootummaa, dhaabbata tajaajilli itti kennamuu yookiin sirna irratti miidhaa qaqqabsiisuuf yaadamee dhaabbilee, tajaajiloota yookiin sirnoota eeraman irratti wantoota baayolojikaalaa, wantoota summummaa qaban dhangalaasuun, gadhiisuun, facaasuun, yookiin lubbuu, yookiin qaama yookiin qabeenya namaa irratti miidhaa qaqqabsiisuuf humna kan qaban yookiin gocha kanaaf kan hojjetaman boba’ootaafi wantoota dhihan kaa’uun, darbachuun, dhoosuun kan raawwatame yoo ta’edha.
3. Namni kamiyyuu nageenya ummataa irratti balaa qaqqabsiisuuf karoorsuun osoo hin ta’iin haala armaan olitti ibsameen lubbuu, qaama, fayyaa yookiin qabeenya nama biroo itti yaadee balaaf kan saaxile yoo ta’e;
4. Namni kamiyyuu haala keewwata xiqqaa(1) jalatti ibsameen lubbuu, qaama, fayyaa yookiin qabeenya nama biroo dagannoon balaaf kan saaxile yoo ta’e; Hidhaa salphaan ni adabama.
5. Keewwata kana keewwata xiqqaa (1) yookiin keewwata xiqqaa (3)n yakki raawwatame salphaa ta’ee yommuu argamu manni murtichaa bakka hidhaa salphaa hojii dirqamaa yookiin adabbii maallaqaa murteessuu ni danda’a.
Keewwata 500.Wantoota Dhohan, Boba’an, Yookiin Summeessan, Karaa Seeraan Ala Ta’een Hojjachuu, Qabachuu, Dhoksuu, Yookiin Geejjibuu
1. Namni kamiyyuu kaayyoo seeraan ala ta’eef karoorfamuu isaanii osoo beekuu wantoota dhohan, boba’an, yookiin summeessan kan hojjeteyoo ta’e;
hidhaa salphaa ji’a jahaa gadi hin taane, yookiin dubbichi ulfaataa yommuu ta’etti hidhaa cimaa waggaa kudhan hin caalleen ni adabama.
2. Namni biroon kaayyoo seeraan ala ta’eef ittifayyadamuuf ta’uu isaa osoo beekuu keewwata xiqqaa(1) jalatti wantoota ibsaman oomishanii baasuuf meeshaalee yookiin qajeelfamoota tajaajilan nama kanaaf kan kenne namni kamiyyuu;
Hidhaa salphaa ji’a jahaa gadi hin taane, yookiin dubbichi ulfaataa yommuu ta’etti hidhaa cimaa waggaa torba hin caalleen ni adabama.
3. Namni kamiyyuu kaayyoo seeraan ala ta’aniif karoorfamuu isaanii osoo beekuu wantoota dhohan, boba’an yookiin summeessan yookiin mi’oota dheedhii isaan kana oomishuuf tajaajilan biyyaa alaarraa kan fichisiise harkatti kan galfate, kan bite, yookiin kan biroof dabarsee kan kenne, kan biroo irraa kan fudhate kan kuuse, kan dhokse yookiin kan geejjibe yoo ta’e;
Gochicha kan raawwate gatiin yookiin tolas ta’us, hidhaa salphaa ji’a jahaa gadi hin taaneen, yookiin dubbichi ulfaataa yommuu ta’etti; hidhaa cimaa waggaa shan hin caalleen ni adabama.
Keewwata 501. Dambiilee Hojii Gamoo Cabsuu
1. Namni kamiyyuu hojii gamoo yookiin diigiinsa gamoo akaakuu kamiyyuu yommuu to’atu, gaggeessu, yookiin raawwatu dambiilee eeggannoo seeraan tumaman yookiin ogummaa yookiin muuxannoo hojii gamoo ittiin hojjetaman itti yaadee cabsuun nageenya ummataa yookiin lubbuu, fayyaa yookiin qaama namootaa, yookiin qabeenya nama biroo balaarraa kan buusee yoo ta’e; Hidhaa salphaa ji’a sadii gadi hin taaneefi adabbii maallaqaan ni adabama.
Adabbichi hidhaa salphaa waggaa tokko hin caallee yookiin adabbii maallaqaa ni ta’a.
Keewwata 502. Meeshaalee Yookiin Mi’oota Ittisa Balaa Kaasuu Yookiin Gurmeessuu Dhabuu
(a) jaarmiyaa yookiin warshaa, iddoo albuudaa, kamittuu yookiin iddoo hojii biroo kamiyyuu keessatti akka balaan hin qaqqabne ittisuuf meeshaa kaa’ame kan balleesse, kan kaase, kan mancaase, faayida qabeessuummaa isaa kan hambise, yookiin hojiin ala kan taasise yoo ta’e; yookiin
(b) bu’uura seeraa yookiin ajaja abbaa aangoo dhimmi ilaallatuun dirqama meeshaa hojii eegumsaaf tajaajiluu qopheessuu dhiisuun nageenya nama biroo balaarraa kan buuse yoo ta’e; hidhaa salphaafi adabbii maallaqaan ni adabama.
2. Yakkichi kan raawwatame dagannoon yoo ta’e; adabbichi hidhaa salphaa waggaa tokko hin caalle yookiin adabbii maallaqaa qarshii kuma shan hin caalle ni ta’a.
Keewwata 503. Balaa Ulfaataa Ummatarra Gahu Beeksisuu Dhabuu
Namni kamiyyuu ofiisaa yookiin kanneen biroo irratti miidhaa osoo hin fidiin beeksisuu yookiin tarkanfilee eeggannoo fudhachuu osoo danda’uu balaa gubiinsaa, dhohiinsaa, lolaayookiin balaa uumamaa kan ta’e yookiin kan hin taane lubbuu, fayyaa yookiin qabeenya namaa irratti miidhaa fiduu danda’u abbaa aangoo yookiin qaamolee ittigaafatamummaa eegumsaa qabanitti kan hin beeksisne yookiin haala kamiiniyyuu balaan kun akka hin qaqqabne ittisuuf yeroosaatti tarkaanfilee eeggannoo barbaachisaa ta’an kan hin taasifne yoo ta’e;
Hidhaa salphaa waggaa tokko hin caalleen yookiin adabbii maallaqaan ni adabama.
Keewwata 504. Haalawwan Qusataman
Tumaaleen boqonnaa kanaa iddoowwan hojiifi hojiiwwan tajaajilaa ittisa biyyaaf yookiin loltummaaf dhaabbatan miidhuu yookiin mancaasuu, keessumattuu diiguu yookiin gufachiisuu raawwatiinsa tumaalee miidhaarra buusuu ilaalatan /keewwata 247(a),308,309 fi 327(a)/ hin hambisan.
Yakkoota Bilisummaafi Tasgabbii Geejjibafi Qunnamtiilee Irratti Raawwataman
Keewwata 505.Hojiiwwan Qabatamoofi Tajaajiloota Faayidaa Ummataaf Hundaa’an Irratti Miidhaa Qaqqabsiisuu
(a) ummataaf tajaajila kan kennan yookiin faayidaa ummataaf hojiirraa kan oolan geejjiboota yookiin qunnamtiilee lafaa, bishaanii, galaanaa yookiin qilleensa irra, isaanuma kana haaromsuuf, suphuuf, irra deebiin hojjechuuf yookiin tajaajila akka kennan taasisuuf hojiilee ijaarsaa fayyadan dabalatee; yookiin
(b) dhaabbilee yookiin tajaajilawwan Poostaaf, teelegrafaaf, walqunnamtii bilbilaaf yookiin telekominikeshinaaf walumaagalatti yookiin tajaajila bishaanii, ibsaa, gaazii, humnaa, yookiin ho’ina ummataaf dhiheessuuf yookiin raabsuuf kan hundaa’an;
Hojmaata idileen kan dhorke, jeeqe, yookiin gufachiise yoo ta’e; hidhaa salphaafi adabbii maallaqaa, yookiin dubbichi ulfaataa yommuu ta’etti hidhaa cimaa waggaa shan hin caalleen ni adabama.
2. Yakkichi kan raawwatame nama seeraan yookiin waliigalteen dirqamni irra jiruun yoo tahe, keessumattuu hojiin yookiin dirqamoonni isaa kan addaan citan haallawwan humnaa ol hin taane yookiin seeraan, yookiin waligalteen kan eyyamamaniin ala yoo ta’e;
Adabbichi hidhaa salphaa ji’a sadii gadi hin taaneefi adabbii maallaqaa yookiin dubbichi ulfaataa yommuu ta’etti hidhaa cimaa waggaa torba hin caalle ni taa’e.
3. Yakkichi kan raawwatame dagannoon yoo ta’e adabbichi adabbii maallaqaa qarshii kuma tokko hin caalle, yookiin yakkichi ulfaataa yommuu ta’etti hidhaa salphaa ji’a jaaha hin caalle ni ta’a.
Keewwata 506. Qunnamtiileefi Geejjibaalee Balaa Ulfaataarra Buusuufi Balleessuu
1. Namni kamiyyuu tajaajila ummataa yookiin mi’a daandii geejjiba, hadiida baaburaa, bishaan yookiin qilleensa irra taasifamu walitti bu’isaaf, daandii baburaa irra baasuuf, akka liqimfamu, yookiin balaa biroo namoota yookiin qabeenya irratti miidhaa geessisuu kamiifuu saaxiluuf keessumattuu:
(a) riqicha, hidha, ittisa dambalii, hojii qabatamaa hundeeffame, yookiin meeshaa to’annaa, ittisaa, maallattoo agarsisiftuu, yookiingeejjiba balleessuun, iddoodhaa jijjiiruun, diiguun ykn akka hin tajaajille taasisuun;
(b) karaa, daandii baaburaa, bo’oo guddaa (kanalii) yookiin karaa walqunnamtiibiroo kamiiyyuu irratti balaa fiduu kan danda’u gocha yookiin hojii raawwachuun yookiin gufuu kaa’uun;
(c) ajaja, mallattoo yookiin agarsiftuu sobaa kennuun;yookiin
(d) dirqama, dambii, yookiin eeggannoof tumaalee barbaachisaa ta’an haala kamiin iyyuu cabsuun; Geejjiba ummataa akka hin hojjenne itti yaadee kan taasise, kan gufachiise, yookin haala balaan irra gahuu danda’utti akka argamu kan taasise;
2. Yakki keewwata xiqqaa (1) jalatti ibsame dagannoon kan raawwatame yoo ta’e;adabbichi hidhaa salphaa yookiin adabbii maallaqaan ta’a.
3. Adabbiin hidhaa cimaa hangaa wagga kudhanii kan gahu balleessichi osoo beekuu:
(a) dirqama waliigaltee yookiin ogummaa irra jiru cabsuun gochicha kan raawwate yoo ta’e; yookiin
(b) lubbu, qaama yookiin fayyaa kanneen biroo balaa irra kan buuse yoo ta’e yookiin qabeenya irratti balaa hedduu olaanaa ta’e kan qaqqabsiise yoo ta’edha.
4. Yakkichi dagannoon kan raawwatame dirqama hojii ogummaa yookiin waliigalte cabsuun yoo ta’e; Adabbichi hidhaa salphaa ji’a tokkoo gadi hin taane ta’a.
5. Gochi yakkichaa dhaabbilee yookiin meeshaalee nageenya adeemsa qilleensa irraayookiin galaana irraa tajaajilan barbadeessuun, mancaasuun yookiin hojmaata isaanii gufachiisuuf jidduu seenuun kan raawwatame ta’ee xiyyaara balali’aa jiru yookiin doonii imalarra jiru balaaf kan saaxilu yoo ta’e;
Adabbichi hidhaa cimaa waggaa kudha shanii hanga waggaa digdamii shanii gahuu ni danda’a.
6. Gochi keewwata xiqqaa shan (5) jalatti ibsame kan raawwatame dagannoon yoo ta’e; adabbichi hidhaa cimaa waggaa shanii hanga waggaa kudha shanii gahuni ta’a.
Keewwata 507.Bakka Dhaabbataafi DaangeffamaakontiineentaalShalfiitti Argamu, Xiyyaaraafi Doonii Seeraan Ala Qabuu.
1. Namni kamiyyuu humnaan, dhaadannaan yookiin mala sodaachisuu birookamiiniyyuu, dabaan yookiin karaa seeraan alaa kamiiniyyuu bakka dhaabbataafi daangeffamaa kontiinentaal shalfiitti argamu, xiyyaara tajaajila yookiin balali’a irra jiru yookiin bakka qubannaa isaa dhaabbatee jiru, yookiin doonii tajaajila yookiin imala irra jiru yookiin buufata galaanaa irra dhaabbate itti yaadee kan qabe yookiin to’annoo jala kan oolche yoo ta’e;
Hidhaa cimaa waggaa kudha shanii hanga waggaa digdamii shanii gahuu danda’uun ni adabama.
2. Kaayyoo keewwata kanaa fi keewwatoota arfan armaan gadii jiraniif:
(a) “Xiyyaaraa tajaajilarra jiru” jechuun hojjettoonni geejjiba qilleensaa yookiin xiyyaara balali’aaf murtaa’eef qophii dursaa taasisan irraa eegalee xayyaarichi erga qubatee booda hanga sa’atii digdamii afuriitti yeroo jiru kan ilaallatudha.
(b) “Xiyyaara balali’aa jiru” jechuun yeroo balballi xiyyaarichaa inni alaa cufame irrraa eegalee balballi isaa hanga banamutti yeroo jiru kan ilaallatu yommuu ta’u, xiyyaarichi dirqisiifamee kan qubate yoo ta’e yeroon kun xiyyaaricha, namootaa fi qabeenya hunda gadhiisisuuf yeroo inni fudhatu ni dabalata.
Keewwata 508. Bakka Dhaabbataafi Daangeffamaa KontiinentaalShalfiitti Argamu, Xiyyaara Yookiin Doonii Haala Yaaddeessaarra Buusuu.
1. Namni kamiyyuu bakka dhaabbataafi daangeffamaakontiinentaalshalfiitti argamu, xiyyaaraa tajaajila yookiin balali’a irra jiru yookiin bakka qubannaa dhaabbate, doonii tajaajila yookiin imalarraa jiru yookiin bakka buufataa dhaabbate keessatti nama argamu irratti itti yaadee karaa seeraan alaatiin gocha humnaa kan raawwate yoo ta’eefi gochichi nageenya bakkichaa, xiyyaarichaa yookiin doonichaa balaarra buusuu kan danda’u yoo ta’e;
2. Namni kamiyyuu bakka dhaabbataafi daangeffamaa kontiinenntaalaashalfiittiargamu ,xiyyaara tajaajila yookiin balali’a irra jiru yookiin bakka qubannaa isaa dhaabbate, yookiin doonii tajaajila yookiin imala irra jiru, yookiin buufata galaanaa dhaabbate keessatti nama argamu irratti dagannoon gocha humnaa kan raawwate yoo ta’eefi gochichis nageenya bakkichaa, xiyyaarichaa yookiin doonichaa balaa irra buusuu kan danda’u yoo ta’e;
Hidhaa cimaa waggaa shanii hanga waggaa kudha shanii gahuu danda’uun ni adabama.
Keewwaa 509. Bakka Dhaabbataafi DangeeffamaaKontiinentaalShalfiitti Argamu, Xiyyaara Xookiin DooniiIrratti Balaa Qaqqabsiisuu.
1. Namni kamiyyuu bakka dhaabbataafi daangeffamaakoontiinentaalshalfiittiargamu yookiin xiyyaara tajaajila yookiin balali’a irra jiru yookiin bakka qubannaa isaattiargamu yookiin doonii tajaajila yookiin imala irra jiru yookiin buufata galaanaa keessatti argamu itti yaadee karaa seeraan alaatiin kan barbadeesse yoo ta’e, yookiin wantoota kanneen keessaa tokko irratti miidhaa geessiseen tajaajilaaf, balali’aaf yookiin imalaaf gahaa akka hintaane kan taasise yoo ta’e, yookiin nageenyi tajaajilaa, balali’aa yookiin imalaa balaaf akka saaxilamu miidhaa taasisuu danda’u kan geessiseyoo ta’e;
2. Namni kamiyyuu bakka dhaabbataafi daangeeffamaakontiinentaalishalfiittiargamu yookiin xiyyaara tajaajila yookiin balali’a irra jiru yookiin buufata isaatti argamu yookiin doonii tajaajila yookiin imala irra jiru yookiin buufata galaanaa keessatti argame dagannoodhaan kan barbadeesse yoo ta’e, yookiin wantoota kana keessaa tokko irratti miidhaa dagannoodhaan geessiseen tajaajilli, balala’iinsi yookiin imalli isaa gahaa akka hin taane kan taasise yoo ta’e, yookiin nageenyi tajaajilaa, balali’aa yookiin imalaa balaaf akka saaxilamu miidhaa taasisuu danda’u kan qaqqabsiiseyoo ta’e;
Hidhaa cimaa waggaa shanii hanga waggaa kudha shanii gahuu danda’uun ni adabsiisa.
Keewwata 510. Mallattooleefi Waamicha Gargaarsaatti Seeraan AlaTaasisuu
1. Namni kamiyyuu dabaan yookiin sababa gahaa osoo hin qabaatin qunnamtiiwwan irratti jeequmsi akka ka’u yookiin qunnamtiin akka addaan citu yaaduun mallattoo balaa yookiin gaaffii gargaarsaa yookiin ergaa baratame yookiin waliigaltee addunyaalessaatiin beekame kan dabarse, meeshaa nageenyaa yookiin akeekkachiisaatiin fayyadamuun ergaa akeekkachiisaa kan dabarse yookiin akeekkachiisa balaa teelekoominkeeshinaatiinseeraan ala kan fayyadame yoo ta’e;
2. Yakkichi xiyyaarabalali’arra jiru yookiin doonii imalarra jiru balaaf saaxiluuf odeeffannoo sobaa dabarsuun kan raawwatme yoo ta’e; adabbichi hidhaa cimaa waggaa kudha shanii hanga waggaa digdamii shanii gahu ni ta’a.
3. Gochi keewwata xiqqaa (2) jalatti ibsame kan rawwatame dagannoon yommuu ta’etti adabbichi hidhaa cimaa waggaa shanii hanga waggaa kudha shanii gahu ni ta’a.
Keewwata 511. Wantoota Yookiin Meeshaalee Balaafamoo Ta’an Karaa Seeraan Alaatiin kaa’uu Yookiin Fe’uu.
1. Namni kamiyyuu balaa geessisuuf yaadee geejjiboota ummataa kan lafaa, qilleensaa, yookiin bishaanii irratti wantoota yookiin meeshaalee boba’an, dhoo’an, yookiin kallattiin kan summeessan,yookiin tuttuqaan, dhukkeessuun (emanations) yookiin bittinsuu fi urkuudhaan kan balleessan yookiin miidhaan kan kaa’e yookiin akka kaa’aman kan taasise, kan fe’e yookiin kan feesise, qabatee kan imale yoo ta’e;
Hidhaa cimaa waggaa shanii hanga waggaa kudha shanii gahuu danda’auun ni adabama.
2. Namni kamiyyuu itti yaadee:
(a) Nageenya bakka dhaabbataafi dangeeffamaakontiinental shalfiitti argamu irratti balaa buusuuf;
(b) Xiyyaara tajaajila irra jiru barbadeessuuf yookiin balali’aaf gahaa akka hin taane yookiin nageenyi balali’a isaa balaaf akka saaxilamu taasisuuf; yookiin
(c) Doonii barbadeessuuf yookiin fe’isa isaa yookiin doonicha irratti miidhaa geessisuuf yookiin nageenyi imala isaa balaaf akka saaxilamu taasisuuf,
meeshaa yookiin mi’a dandeessisu kamiyyuu tooftaa kamiiniyyuu xiyyaaricha yookiin doonicha yokiin bakka dhaabbataafi daangeffamaa kontinteentaal shalfiittiargamu irra kan kaa’e yookiin akka kaa’amu kan taasise yoo ta’e;
Hidhaa cimaa waggaa kudhanii hanga waggaa kudha shanii gahuun ni adabama.
3. Namni kamiyyuu balaa buusuuf yookiin miidhaa geessisuuf yaadee osoo hin ta’in osoo beekuu dambiiilee yookiin qajeelfamoota nageenya eegumsa tiraafiikaa ilaalchisee bahan darbuungochoota keewwata xiqqaa (1) jalatti ibsaman keessaa tokko kan raawwate yoo ta’e; Hidhaa cimaa waggaa torba hin caalleen ni adabama.
4. Namni kamiyyuu geejjiboota ummataa kan lafaa, qilleensaa yookiin bishaanii irratti yakkoota raawwatamanu ittisuufi too’achuuf itti gafatamummaan kan irra kaa’ame ta’ee osoo jiruu, dirqama hojii isaa dagannoon osoo hin ba’iin hafee geejjiboota kanneen yookkiin bu’uuraalee tajaajilaa isaanii irratti wantoonni yookiin meeshaaleen balaa geessisuu danda’an kaa’amanii yookiin fe’amanii kan argaman yoo ta’e;
5. Gochi keewwata xiqqaa (2) jalatti ibsame dagannoon kan raawwatame yoo ta’e; adabbichi hidhaa cimaa waggaa shanii hanga waggaa kudha shanii gahu ni ta’a.
Keewwata 512. Haala Ulfaataa
1. Yakkoota keewwata 505 hanga 511 jalatti ibsaman keessaa tokko itti yaadamee yommuu raawwatamu lubbuu, qaama yookiin fayyaa namaarratti miidhaan kan gahe yoo ta’e;
Hidhaa cimaa waggaa kudhanii hanga waggaa digdamii shanii gahuu danda’uun, yookiin dubbichi ulfaataa yommuu ta’utti hidhaa cimaa umurii guutuun yookiin du’aan ni adabsiisa.
2. Yakkichi kan raawwatame dagannoon yoo ta’e, adabbichi hidhaa cimaa waggaa shanii hanga waggaa kudha shanii gahu ni ta’a.
Keewwata 513. Hirmaannaa Yakkaa Jaarmiyaa Namummaan Seeraa Kennameefii
Jaarmiyaan namummaan seeraa kennameef kamiyyuu bu’uura seera kana keewwata 34 tiin tumameen yakkoota boqonnaa kana keessatti ibsaman keessaa tokkorratti hirmaataa yommuu ta’u; bu’uura seera kana keewwata 90 tiin ni adabama.
Mata Duree Saddeet
Yakkoota Fayyaa Irratti Raawwataman
Tumaalee Waliigalaa Eegumsaa Cabsuu
Yakkoota Dhukkuboota Daddabarsuufi Naannoo Faaluun Raawwataman
Keewwata 514. Dhukkuba Namaa Daddabarsuu
1. Namni kamiyyuu itti yaadee dhukkuba daddarbaanamatti kan tamsaase yookiin kan dabarse yoo
(a) Yaada jibbiinsaan, haaloon, hammeenyaan yookiinsalphinaan dhukkuba miidhaa ulfaataa yookiin du’a hordofsiisuunama biroorratti kan tamsaase yookiin dabarse yoo ta’e; yookiin
(b) Yaadni keewwata kana qubee (a) jalatti ibsame yoo jiraachuu baatelleedhukkuba miidhaa ulfaataa yookiin du’a hordofsiisunama biroorratti kan tamsaase yookiin kan dabarse yoo ta’e; yookiin
(c) Dhukkuba golfaa/epidemic/ ta’e kan dabarse yoo ta’e;
Hidhaa cimaa waggaa digdama hin caalleen yookiin dubbichi ulfaataa yommuu ta’etti hidhaa cimaa umurii guutuun yookiin du’aan ni adabama.
3. Yakkichi kan raawwatame dagannoon yoo ta’e, adabbichi hidhaa salphaa yookiin adabbii maallaqaa ni ta’a.
Keewwata 515. Dhukkuba Beelladaa Tamsaasuu
1. Namni kamiyyuu itti yaadee beelladoota manaa, lukkuuwwanii fi simbirroowwan madaqan kan lukkuu fakkaatan, bineensota bosonaa adamsaman, qurxummii, kanniisota yookiin bineensota bosonaa seeraan eegaman gidduutti dhukkuba kan tamsaase yoo ta’e; Hidhaa salphaa yookiin adabbii maallaqaan ni adabama.
(a) Yakkicha kan raawwate hammeenyaan yoo ta’e; yookiin
(b) Itti yaadee miidhaa olaanaa kan geessise yoo ta’e,
Adabbichi hidhaa salphaa ji’a sadii gadi hin taane ni ta’a.
3. Yakkichi kan raawwatame dagannoon yoo ta’e;
Adabbichi hidhaa salphaa ji’a jaha hin caalle yookiin adabbii maallaqaa ni ta’a.
Keewwata 516. Ilbiisota Miiddhaanii Yookiin Bosonaa Baayyisuu
Namni kamiyyuu itti yaadee yookiin dagannoon ilbiisota yookiin jermoota oomisha qonnaa ykn bosonaa irratti miidhaa kan geessiisan /immii/germ/kan baayyise yoo ta’e; bu’uura adabbii keewwata 515 jalatti tumameen ni adabama.
Keewwata 517. Bishaan Faaluu
1. Namni Kamiyyuu itti yaadee bishaan dhugaatii namaaf yookiin beelladootaaf tajaajilu wantoota fayyaa miidhaniin kan faale yoo ta’e;
Akka haala dubbichaafi akka hamma miidhichaatiin adabbii maallaqaan yookiin hidhaa salphaa ji’a tokkoo gadi hin taaneen, yookiin yakkichi cimaa yommuu ta’etti hidhaa cimaa waggaa torba hin caalleen ni adabama.
2. Yakkichi kan raawwatame boollawwan bishaanii, kuusaalee, burqaawwan, galoowwan bishaanii/Water Holes/, laggeen, yookiin haroowwan itti yaadee sumeessuun yoo ta’e; adabbichi hidhaa cimaa waggaa kudha shan hin caalle ni ta’a.
3. Gochi armaan olitti keewwata xiqqaa (1) yookiin (2) jalatti ibsame kan raawwatame dagannoon yoo ta’e; adabbichi hidhaa salphaa, yookiin dubbichi salphaa yoo ta’e adabbii maallaqaa ni ta’a.
Keewwata 518. Bakka Dheedichaa Faaluu
1. Namni Kamiyyuu lubbuu yookiin fayyaa beelladootaa balaarraa buusuuf yaadee wantoota summaa’aa yookiin miidhaa geessisaniin dheedichaa yookiin dirree kan faale yoo ta’e;
Adabbii maallaqaan yookiin hidhaa salpaan, yookiin dubbichi ulfaataa yommuu ta’etti hidhaa cimaa waggaa torba hincaalleen ni adabama.
2. Yakkichi kan raawwatame dagannoon yoo ta’e, adabbichi hidhaa salphaa ji’a jaha hincaalle yookiin adabbii maallaqaa ni ta’a.
Keewwata 519. Naannoo Faaluu
1. Namni kamiyyuu seera rogummaa qabu darbuun wantoota faalan gara naannootti kan gadhiise yoo
Adabbii maallaqaa qarshii kuma kudhan hincaalleen yookiin hidhaa cimaa waggaa shan hincaalleen ni adabama.
2. Faalumsichi lubbuu yookiin fayyaa namoota yookiin naannoorratti miidhaa ol’aanaa kan geessise yoo ta’e; adabbichi hidhaa cimaa waggaa kudhan hincaalle ni ta’a.
3. Balleessichi gocha kanaan tumaa seera yakkaa adabbii ol’aanaa hordofsiisu kan cabse yoo ta’e; tumaaleen waa’ee yakkoota dachaaf tumaman raawwatamoo ni ta’u.
Keewwata 520. Balfa/Kosii/fi Wanta Biroo Balaafamaa Ta’e Sirnaan Qabuu Dhabuu
(a) Balfa/Kosii/yookiin wanta balaafamaa bu’uura seerota rogummaa qabaniin kan hinqabne yoo ta’e; yookiin
(b) Kosii yookiin wanta balaafamaa ilaalchisee tarreeffaman maxxanfamuu qabu kan hin maxxansine yoo ta’e; yookiin
(c) Kosii/balfa/yookiin wanta balaafamaa kan naannesse yoo ta’e;
Adabbii maallaqaa qarshii kuma shan hin caalleen yookiin hidhaa cimaa waggaa sadii hincaalleen yookiin lamaaniinuu ni adabama.
Keewwata 521. Gochoota Sakatta’a Dhiibbaa Naannoo Waliin Wal Falleessan Raawwachuu
Namni Kamiyyuu Sakatta’iinsi dhiibbaa naannoo akka irratti taasifamu piroojektii seeraan ajajame kamiyyuu hayyama osoo hin argatiin hojii irra kan oolche yoo ta’e; yookiin kanuma kan ilaallatu ibsa sobaa kan dhiyeesse yoo ta’e;
Hidhaa salphaa waggaa tokko hincaalleen ni adabama.
Keewwata 522. Tarkaanfilee Eeggannoo Fayyaa Eeguufi Kunuunsuuf Seeraan Tumaman Cabsuu
1. Namni Kamiyyuu tarkaanfilee eeggannoo dhukkuba namaa daddarboo ittisuuf, daangessuuf yookiin dhaabuuf seeraan tumamaan itti yaadee kan cabse yoo ta’e;
Hidhaa salphaa waggaa lama hincaalleen yookiin adabbii maallaqaan ni adabama.
2. Yakkichi kan raawwatame dagannoon yoo ta’e; adabbichi hidhaa salphaa ji’a jaha hincaalle yookiin adabbii maallaqaa qarshii kuma sadii hincaallee ni ta’a.
3. Tarkaanfii eeggannoo tamsa’ina dhukkuba beelladootaa yookiin minaanii yookiin ilbiisa bosonaa yookiin imii (germ) yookiin faalama naannoo ittisuuf, daangeessuuf yookiin dhaabuuf tumame itti yaadamee kan cabe yoo ta’e; adabbichi hidhaa salphaa waggaa tokko hincaalle yookiin adabbii maallaqaa ni ta’a.
4. Gochi keewwata xiqqaa (3) jalatti ibsame kan raawwatame dagannoon yoo ta’e; adabbichi hidhaa salphaa ji’a sadii hincaalle yookiin adabbii maallaqaa qarshii kuma tokko hin caalle ni ta’a.
Keewwata 523. Rakkoon Yookiin Beelli Akka Qaqqabu Taasisuu
1. Namni kamiyyuu itti yaadee karaa Kallattiin Yookiin alkallattiin keessumattuu dhoksuun, seeraan ala kuusuun, balleessuun yookiin lubbuu yookiin fayyaa namaaf yookiin beelladaaf barbaachisaa ta’an minaan, nyaata, galaa /soorata/, qoricha/dawaa/ yookiin wantoota barbaachisoo biroo deddeebisuu yookiin raabsuu dhorkuudhaan biyya keessatti gidiraan/dararri/, dhabiinsi, beelli, dhukkubni daddarboon, dhukkubni beelladootaa yookiin rakkoon akka ga’u kan taasise yoo ta’e; Hidhaa cimaa waggaa kudha shan hincaalleen ni adabama.
2. Namni kamiyyuu rakkoon akkanaa yommuu gahetti rakkicha ittisuuf, daangeessuuf yookiin dhabamsiisuuf kan barbaachisu nyaata, qorichaa/dawaa/ yookiin mi’oota biroo kamiiniyyuu dhiyeessuuf dhiyeessitummaan, qunnamsiistummaan, dhiyeessaa muummee waliin garee waliigale ta’uudhaan, deddeebistummaadhaan, bakka bu’ummaan, yookiin haala biroo kamiiniyyuu dirqamoota yookiin itti gaafatamummaa irra jiru sababni humnaa ol ta’e osoo isa hinmudatiin kan hin raawwanne yookiin hojii irra kan hin oolchine yoo ta’e; Bu’uura keewwata xiqqaa (1) tiin ni adabama.
3. Yakkichi kan raawwatame jaalala maallaqan yoo ta’e, adabichi hidhaa cimaa waggaa digdama hin caalleefi adabbii maallaqaa qarshii kuma dhibba tokko hin caalle ni ta’a.
Keewwata 524. Hirmaannaa Yakkaa Jaarmiyaa NmummaanSeeraaKennameefii
Yakkoota kutaa kanaan ibsaman keessaa tokkotti jaarmiyaan namummaan seeraa kennameef yoo hirmaatebu’uura seera kana keewwata 90n tumameen ni adabama.
Wantoota Fayyaa Namaafi Beelladootaa Irratti Miidhaa Geessisuu Danda’an Oomishuufi
Keewwata 525. Qorichoota Yookiin Baalaawwan Summaa’aa yookiin Naarkotikiifi Saayikotiroppikii
Oomishuu, Hojjechu, Naannessuu Yookiin Fayyadamuu
1. Namni kamiyyuu hayyama addaa Osoo hin qabatiin:
(a) Wantoota summaa’aa yookiin qorichoota yookiin baalawwan naarkotikii yookiin saayikotiroppikii kan biqilchee, omishe, hojjete, jijjiire yookiin warshaan kan tolche;
(b) Wantoota armaan olitti qubee (a) jalatti trreeffaman keessaa tokko qabatee kan argame, gara biyyaatti kan galche, biyya alatti kan erge, kan geejjibe, kan kuuse, kan dallaale, kan bite, gurgurtaaf kan dhiheesse, kan tamsaase, kan naannesse, dabarsee kan kenne yookiin kan biroof kan argamsiise;
(c) Wantoota armaan olitti qubee (a) jalatti tarreeffaman keessaa tokko, ooomishuuf, qopheessuuf yookiin tolchuuf meeshaalee tajaajilan kan hojjete, qabatee kan argame, gara biyya keessatti kan galche, biyya alaatti kan erge; yookiin
(d) Wantoota qubee (a) jalatti ibsaman hojjechuuf, qopheessuf, oomishuuf, gurguruuf yookiin raabsuuf, mana, mooraa, yookiin iddoo isaa abbaa qabeenyaa yookiin abbaa qabiyyee itti ta’e kan kenne, kan kireesse yookiin kan hayyame yoo ta’e, hidhaa cimaa waggaa shanii gadi hin taaneefi adabbii maallaqaa qarshii kuma dhibba tokko hin caalleen ni adabama.
2. Adabbichi hidhaa cimaa waggaa kudhanii gadi hin taaneefi adabbii maallaqaa qarshii kuma dhibba lama hin caallee kan ta’u:
(a) Yakkichi kan raawwatame daldala kanaaf yookiin sadarkaa addunyaalessaatis ta’e biyyaatti yakka raawwachuuf garee yookiin waldaa gurmaa’etti nama miseensa ta’een yookiin gocha seeraan alaa kan ogummaa isaa godhatee qabateen yoo ta’e;
(b) Balleessichi wanta seeraan alaa dhorkame yookiin iddoo wanta akaakuu akkanaaf fayyadu osoo beekuu kan kenne yookiin kan hayyame jaalala maallaqaan, kaayyoo salphummaan yookiin hin malleen yoo ta’e; yookiin fayyadamtichi daa’ima, dargaggoo gaa’ila hin geenye yookiin sammuun isaa sirrii hin taane, yookiin araada baala sammuu adoochuun kan qabame yoo ta’e;
(c) Yakkamtichi yakkicha kan raawwate gocha yakkichaaf daa’imman yookiin nama sammuun isaa sirrii hin taanetti fayyadamuun yoo ta’e;
(d) Yakkichi kan raawwatame mana sirreessaa mooraa mana barumsaa, yookiin dhaabbata tajaajila hawaasummaa biroo keessatti, iddoo daa’imman yookiin barattoonni dargaggoon barumsaaf, ispoortiif yookiin sossochiiwwan hawaasummaa biroof itti fayyadamanitti yoo ta’e; yookiin
(e) Yakkamtichi Sababa yakka walfakkaatu duraan raawwateen murtiin balleessummaa irratti kennamee kan ture yoo ta’edha.
3. Namni kamiyyuu wantoota summaa’aa yookiin qorichoota yookiin baalawwan naarkotikii yookiin sayikotiroppikii kan argaman gochoota yakkaa keewwata kana keewwata xiqqaa (1) yookiin (2) jalatti tarreeffaman keessaa sababa isa tokkoon ta’uun isaa yookiin gochoota yakkaa tarreeffaman keessaa tokko raawwachuuf kan karoorfaman ta’uu isaa osoo beekuu, wantoota kana qabatee kan argame, kan geejjibe, kan kuuse yookiin dabarsee kan kenne yoo ta’e;
Hidhaa cimaa waggaa shanii gadii hin taaneefi adabbii maallaqaa qarshii kuma dhibba tokko hin caalleen ni adabama.
4. Namni kamiyyuu:
(a) Ofiisaa yookiin namni biroo dhuunfaatti akka itti fayyadamu yaadee wantoota armaan olitti keewwata xiqqaa (1) jalatti ibsaman keessaa tokko kan biqilche, kan bite, kan fuudhe, kan hojjete, qabatee kan argame, kan gurgure, kan kenne; yookiin
(b) Wantoota kana keessaa tokkotti hayyama hakiimaa malee yookiin karaa seeraan alaa birookamiiniyyuu kan fayyaadame yookiin namni biroo akka itti fayyadamu kan taasise yoo ta’e;
Hidhaa cimaa waggaa torba hin caallee fi adabbii maallaqaa qarshii kuma shantama hin caalleen ni adabama.
5. Wantoota naarkotikii yookiin saayikotiroppikii kaayyoo seeraa alaatiif oolchuuf yaaduun ogeessa yaalaa dogoggorsuun waraqaa qorichi ittiin ajajamu akka kennamuuf kan taasise yookiin karaa seeraatiinis ta’ee, seeraan alaatiin waraqaa qorichi ittiin ajajamu argate sana garee sadaffaa hin hayyamamneef namni dabarse; yookiin waraqaa wantoonni naarkotikii yookiin saayikotiroppikii ittiin ajajaman itti yaadee ogeessi yaalaa karaa seeraan alaatiin barreesse; Hidhaa cimaa waggaa shan hin caalleefi adabbii maallaqaan ni adabama.
6. Seera kanaan tumaaleen qabeenya mootummaaf galii ta’uu qabu /Keewwta 140/ fi maallaqa yookiin qabeenya gocha yakkaatiin argame fakkeessee dhiheessuufi yakkicharratti gargaaruu/Keewwata 684/ Jalatti ibsaman akkuma eegamanitti ta’u.
Keewwata 526. Qoricha Humna Kennan (Dopping)
(a) Gahumsa qaamaa , uumamaa fi leenjiin argame yeroof caalmaatti akka dabalu taasisuun yeroo dorgommii ispoortii olaantumaa qaamaafi xinsammuu argachuuf kan gargaaran wantoota namtolchee seeraan dhorkamaniifi miidhaa geessisan kan omishe, gara biyya keessatti kan galche, kan gurgure, ogummaa isaatiin kan ajaje, kan raabse; yookiin
(b) Wantoota qubee (a) jalatti ibsamanitti karaa seeraa alaatiin kan fayyadame yookiin namni biroo akka itti fayyadamu kan taasise yoo ta’e;
Hidhaa salphaan yookiin adabbii maallaqaan yookiin gochichi miidhaa ulfaataa yommuu geessise, hidhaa cimaa waggaa shan hin caalleen ni adabama.
2. Namni kamiyyuu kaayyoo keewwata xiqqaa(1) jalatti ibsameef oolchuuf yaaduun, qoricha/dawaa/seeraan hayyamame haala hin malleen yookiin kaayyoo hojjetameef ala kan ajaje, kan kenne, yookiin kan fayyadame yoo ta’e;
3. Gochoota armaan olitti keewwata xiqqaa (1) yookiin (2) jalatti ibsaman keessa tokko kan raawwatame dagannoon yoo ta’e; adabbichi hidhaa salphaa ji’a sadii hin caalle, yookiin adabbii maallaqaa qarshii kuma shan hin caalle ni ta’a.
Keewwata 527. Mi’oota Yookiin Nyaatawwan Miidhaa Geessisan Yookiin Badan Hojjechuufi Gurguruu, Akkasumas Qulqullina Isaanii Gadi Buusuu
2. Namni Kamiyyuu:
(a) Nyaatawwan, soorata, wantoota biroo nyaataaf tajaajilan itti fayyadama namaaf akka hin taane gochuun yookiin wantoota nyaata qopheessuuf/hojjechuuf/tajaajilan qabiyyee miidhuu akka qabaatan taasisuun kan hojjete yoo ta’e; yookiin fayyaa ummataa haala miidhuun qulqullina nyaatawwanii yookiin mi’oota kan gadi-buusee yoo ta’e; yookiin
(b) Bu’aalee oomishaa miidhaa qaban akaakuu akkanaa kan kuuse, gurgurtaaf kan dhiheesse, biyya alaatti kan erge, biyya keessa kan galche, kan fuudhe, yookiin kan raabse yoo ta’e;
Hidhaa salphaa ji’a jahaa gadi hin taaneen yookiin dubbichi ulfaataa yommuu ta’etti, hidhaa cimaa waggaa shanii gadi hin taaneefi adabbii maallaqaan ni adabama.
3. Adabbichi hidhaa cimaa waggaa torbaa gadi hin taane kan ta’u, balleessichi:
(a) Faayidaa ummataaf jecha jaarmiyaa mootummaan kan qabame yookiin mootummaa irraa konseeshiniin kenname dirqama addaa to’achuu yookiin qorachuu kan qabu ta’ee yommuu argamu; yookiin
(b) Dhukkuba kan fayyisan, fayyummaa kan cimsan, uumama/qabiyyee/ nyaataa kan qaban yookiin toonikii kan ta’an summaa’ina kan hin qabnee fi ajaja ogeessa yaalaa malee kennamuu kan danda’an qorichoota/dawaalee/ addaddaa haala badaan oomishamuu isaaniin yookiin qulqullinni isaanii gadi bu’uu isaan miidhaa beekamaa kan fidan ta’uun isaanii yommuu beekamu yookiin beekuun yommuu danda’amu, qorichoota/dawaalee/ kana itti yaadee kan oomishe, qulqullina isaanii kan gadi buuse, kan gurgure, yookiin kan raabse yoo ta’edha.
4. Yakkichi kan raawwatame dagannoon yoo ta’e; adabbichi hidhaa salphaa ji’a jaha hin caalle, yookiin adabbii maallaqaa ni ta’a.
Keewwata 528. Hokaafi NayaataBeelladaa Biroo Midhaa Akka Geessisu Taasisuun Hojjechuu;
Qulqullina Gadi Buusuufi Gurguruu
(a) Qulqullina hokaa yookiin nyaata uumamaa beelladaa kan gadi buuse yookiin fayyaa yookiin lubbuu beelladootaa, irratti miidhaa qaqqabsiisuuakka danda’u taasisee kan oomishe yoo ta’e; yookiin
(b) Hokaa yookiin nyaata akaakuubiroo miidhaadhuma kana kan qaqqabsiisu biyya alaarraa kan fichisiise, gara biyya alaatti kan erge, kan kuuse, kan gurgure, gurgurtaaf kan dhiheesse yookiin kan raabse yoo ta’e;
2. Yakkichi kan raawwatame dagannoon yoo ta’e; adabbichi hidhaa salphaa waggaa sadii hin caallee yookiin adabbii maallaqaa ni ta’a.
Keewwata 529. Haalawwan Adabbii Cimsan.
Balleessichi Yakkoota armaan olitti keewwatoota 527 fi 528 jalatti ibsaman ogummaa isaa godhatee kan qabate yoo ta’e/keewwata 92/ yookiin yakkicha kan raawwate mi’oota baay’ina olaanaa qaban irratti yoo ta’eefi miidhaan ga’es ulfaataa yommuu ta’u, adabbichi tumaalee kana jalatti kan ibsame adabbii olaanaa bilisummaa dhabsiisuufi adabbii maallaqaa qarshii kuma dhibba lama hin caalle ni ta’a.
Keewwata 530. Hirmaannaa Yakkaa Jaarmiyaa Namummaan Seeraa Kennameefii
Jaarmiyaan namummaan seeraa kennameef kamiyyuu yakkoota keewwata 525 hanga 529 keessatti ibsaman keessaa tokkotti hirmaataa yoo ta’e;
Bu’uura seera kana keewwata 90 tiin ni adabama.
Keewwata 531. Dhugaatiiwwan Alkoolii Yookiin IspiirtoonFayyaa Nama Biroo Balaaf Saaxiluu
1. Namni kamiyyuu itti yaadee akaakuun yookiin baayyinni dhugaatiiwwanii kan miidhu ta’uu isaa kan mirkanaa’e yookiin dhugaatiiwwan alkoolii yookiin Ispiirtooqabanmiidhaa geessisuu danda’an dargaggoo gaa’ila hingeenyeef yookiin humnaa ol dhuguun isaa nama beekameef dhugaatii alkoolii yookiin ispiirtoota dhiyeessuun yookiin kennuun yookiin akka dhiyaatu yookiin akka kennamu taasisuun fayyaa nama biroo balaaf kan saaxile yoo ta’e;
Hidhaa salphaa waggaa tokko hincaalleefi adabbii maallaqaan ni adabama.
2. Yakkichi irra deddeebiin kan raawwatame yoo ta’e; hojii ogummaa isaa dhorkuun akkuma eegametti ta’ee hidhaa salphaa ji’a jaha gadi hintaaneen ni adabsiisa.
3. Yakkichi kan raawwatame dagannoon yoo ta’e; hidhaa salphaa ji’a sadii hin caalleen ni adabsiisa.
Keewwata 532. Gochoota Sammuu Tuqaniin Nama Balaaf Saaxiluu
Namni kamiyyuu itti yaadee fajaajessuuun(Hypnosis), of wallaalchisuun yookiin adoochuun yookiin mala biroo kamiiniyyuu dandeetti sammuu namabiroo yeroof balleessuun balaaf kan isa saaxile yoo ta’e; Adabbii armaan olitti keewwata 531 jalatti ibsameen ni adabama.
Keewwata 533. Tolchaan, Falfalaan Yookiin Wantoota Kana Fakkaataniin Nama Irratti Balaa Geessisuu
Namni Kamiyyuu amalli isaanii balaa yookiin miidhaa hordofsiisuu danda’uu osoo beekuu fayyaa miidhuu kan danda’an daakuuwwan bittinnaa’an, wantoota dhukkuba qalbii dadhabsiissn fidan, dhugaatiiwwan, yookiin wantoota kana fakkaatan biroo nama biroof kan qopheesse, kan kenne, kan gurgure, kan raabse yookiin kan obaase yoo ta’e;
Tumaa armaan olitti keewwata 531 jalatti ibsameen ni adabama.
Keewwata 534. Haalawwan Ulfaaataa
1. Balleessichi yakkoota armaan olitti keewwatoota 532 fi 533 jatti ibsaman ogumma isaa godhatee kan qabate yoo ta’e, hidhaa salphaa waggaa tokkoo gadi hin taaneefi adabbii maallaqaan ni adabaama.
2. Miidhamaan osoo hin hayyamiin yakkichi kan raawwatame yoo ta’e, barbachisaa ta’e yoo argame dandeettii yaaduu dhaabsiisuu, keessattuu tumaaleen /keewwataa 583/ dabalataan raawwatamaa ni ta’a.
Tumaalee Yaalaafi Eegumsa Fayyaa Ilaallatan Cabsuu
Keewwata 535. Ogummaa Yaalaafi Eegumsa Fayyaan Karaa Seeraan Ala Ta’een Hojjechuu
1. Namni Kamiyyuu dandeettii ogummaa abbaa aangoo rogummaa qabuun kan murtaa’eefi to’annaan irratti taasifamu osoo hin qabaatiin yookiin bu’uura dambiiilee rogummaa qabaniin ifatti akka hojjetu hayyamni osoo hinkennaminiif yookiin kan hayyamameefiin ala haala kamiiniyyuu dhukkubsattoota yaaluu ogummaa isaa taasifatee kan qabate, yookiin maallaqa fudhachuun kan qorate, kan yaale, gorsa kan kenne, dawaa/qoricha/ kan gurguure yookiin hojiilee yaalaa akaakuu kamiiniyyuu kan raawwate yoo ta’e;
Hidhaa salphaa waggaa tokkoo gadi hin taane yookiin hidhaa cimaa waggaa shan hin caalleefi adabbii maallaqaan ni adabama.
2. Haala armaan olitti keewwata xiqqaa (1) jalatti tumameen hojii beelladoota yaaluu namni hojjetu hidhaa salphaan yookiin adabbii maallaqaan ni adabama.
3. Namni kamiyyuu dawaaa /qoricha/ yookiin meeshaa tajaajila yaalaa kan oomishe, gurgurtaaf kan dhiyeesse, kan gurgure, kan raabse yookiin tajaajila irra kan oolche:
(a) Nageenyummaan isaa, fayyisummaan isaafi qulqullummaan isaa mirkanaa’ee qaama rogummaa qabuun kan hin hayyamamne;
(b) Kan fakkeeffame yookiin kan walitti makame yookiin mannee/Saamsa/ isaa irratti barreeffamni ibsa sobaa kan itti taasifame, kan itti maxxanfame yookiin kan keessa galfame;
(c) Yeroon tajaajilaa isaa kan itti darbe; yookiin
(d) Kan dhorkame, kan manca’e, kan waliin dha’ame, kan faalame yookiin sababa biroo kamiiniyyuu fayyadamaa irratti miidhaa kan geessisu ta’uun isaa kan mirkanaa’e yoo ta’e; Hidhaa cimaa waggaa shanii gad hintaaneefi adabbii maallaqaa qarshii kuma digdamaa hanga kuma shantamaa gahuu danda’uun ni adabama.
4. Ariifachiisaa yookiin barbaachisaa kan ta’e yookiin garalaafinaan yookiin naamusa ogummaa isaa kabajuun gorsa, gargaarsa yookiin tajaajila yookiin haalawwan kana fakkaataniin dawaalee/qorichoota/ uumamaa yookiin barataman fayyisuun isaanii kan mirkanaa’eefi balaa kan hin hordofsiifne darbee darbee bilisaan kennuun gargaarsi taasifamu hin adabsiisu.
5. Naannoo jiraatanitti muuxannoo gahaa qabu jedhamuunnamoonni beekaman bu’uura barmaatilee naannichaatiin hojiilee yaalaa raawwatan irratti tumaan kun raawwatamummaa hin qabu. Kunis kan ta’u, namoonni kun hojii isaanii kan raawwatan naannoo jiraatanitti qofa yoo ta’eefi gochi isaaniis lubbuu, qaama yookiin fayyaa miseensota hawaasa naannoo sanaa balaa irra kan hinbuusne yookiin kan hinmiine yoo ta’eedha.
Keewwata 536. Wantoota Summaa’aafi Balaafamoo Ta’an Seeraa AlaDhiyeessuu.
Hakiimni, Carreessaan/Pharamacist/, hakiimni ilkaanii, hakiimni beelladootaa, narsiin kamiiyyuu yookiin wantoota naarkotikii yookiin saayikotiroppikii summa’aa ta’an yookiin wantoota biroo fayyaa irratti miidhaa ulfaataa geessisuu danda’aniin yaala kennuuf yookiin isaanumaa kana kaa’uuf yookiin gurguruuf namni hayyamameef biroo kamiyyuu, haalawwan hojmaatni yaalaa idileen hayyamuun alaafi hayyama addaa osoo hin qabaatiin wantootuma kanaan kan hojjete, ummataaf kan kenne yookiin kan gurgure yoo ta’e;
Hidhaa salphaa waggaa sadii hin caalleefi adabbii maallaqaatiin, yookiin badichi ulfaataa yoo ta’e; hidhaa cimaa waggaa torba hin caalleefi adabbii maallaqaan ni adabama.
Balleessichi yakkicha kan raawwate jaalala maallaqaan yoo ta’e; adabbiin maallaqichaa hanga qarshii kuma dhibba tokko gahuu ni danda’a.
Keewwata 537. Gargaarsa Yaalaa Sababa Malee Dhorkuu
1. Hakiimni, carreessaan/Pharamacist/, hakiimni ilkaanii, hakiimni beelladaa, deessistuun, narsiin yookiin namni biroon tajaajila yaalaa kennuun hojii isaa ta’uu isaa seeraan beekameef kamiyyuu karaa hojii isaatiin walfaallessuufi sababa gahaa hin taaneen maalnadhibdeen, ofjaallachuun, maallaqa garmalee barbaaduun, jibbaan, tuffiin yookiin sababa kana fakkaatu kamiiniyyuu tajaajila barbaachisaa ta’eefi hojii ogummaa isaatiin raawwachuu qabu osoo hin raawwatin kan hafe yoo ta’e;
Adabbii maallaqaan, yookiin yakkichi kan irra deddeebi’ame yoo ta’e hidhaa salphaa ji’a jahaa hin caalleen ni adabama.
2. Namni tokko lubbuu, qaama yookiin fayyaa isaarra miidhaa cimaan kan gahu ta’ee osoo jiruu gargaarsa kan hin goone namni kamiyyuu kan ittiin adabamu tumaan adabbii olaanaa/Keewwata 575 (2)/ akka eegametti ta’a.